Olee otu na ihe mere eji ewu ulo oru na Dubai?
Kedu ihe mere ị ga-eji zụlite azụmahịa gị na Dubai?
Dubai 7 kpakpando kpakpando
Kedu esi enweta Job na Dubai na 2020?
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at April 19, 2019
Olee otú ịmepụta ndụ dị ka onye ahịa ahịa?
Otu esi ebi ya Business in Dubai Nwoke Nwere Turban
Johne West - Ụlọ ọrụ Dubai City
Izụ ma ọ bụ ghọrọ mmụba ahịa Manager? Ndewo, aha m bụ John West. Adị m njikere ịmalite ụlọ ọrụ gị. M ga - enyere gị aka inweta ndị ahịa si Internetntanetị na Linkedin !.
Onye bu John?
Ọ bụ onye ngalaba-nchoputa nke Dubai City Companylọ ọrụ. Companieslọ ọrụ dị mkpa nke mba ụwa kpọrọ ya Onye Etolite Uto nke Marketingzụ ahịa Internetntanetị na Dubai. Ebe ndị a na-akparịta ụka n'socialntanet na-ewu ewu na-ekwu na ọ bụ otu n'ime ndị ahịa 10 kachasị elu na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ihe karịrị otu nde mmadụ na-elele saịtị ntanetị mmekọrịta nke John West A maara ya maka idu Facebook na Peeji nke Linkedin. Nke a bụ ụlọ ọrụ m na Ulo anyi bu ikwalite Dubai!
Ọtụtụ ndị ọchụnta ego si Dubai na London kwuru na ha ekepụtala otu nnukwu ụlọ ọrụ azụmaahịa 100 na social media na Dubai.
John bụ onye edemede nke ndị na-ere ahịa na ngalaba nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọha ma bụrụ onye a ghọtara dị ka otu n'ime ndị ọchụnta ego kachasị mma n'okpuru afọ 30.
Mee ka ndị ahịa nwee obi ụtọ, nyere gị aka inweta ọrụ nrọ na Dubai.
Bụ ndozi SEO, Ahịa n'ime Google na Bing na n'ozuzu ha na-ekwu, ahia bu ihe di nfe?
Ee, enwere m ike ime ya maka 50% nke ụgwọ ahụ.
Kedu ihe ị na-akwụ ụgwọ maka Growth Hacker?
SEO na Oge?
Ọnọdụ bụ ihe na-aga n'ihu ma na-ewe oge. nke a mere o ji choro otutu ego. Site n’ịhọrọ ọrụ n’ụlọ ọrụ m ị ga-enweta, n’etiti ndị ọzọ:
Nyocha na njikarịcha zuru oke nke ọdịnaya,
Mmezi nke akụkọ, aha mkpado na nkọwa,
Njikarị nke odidi nke njikọta njikọ weebụsaịtị na isi iyi koodu,
Omume banyere ezi ịnweta ígwè ọrụ nyocha engine na ebe nrụọrụ weebụ.
Ntọala Nhazi Google (Nchịkọta Google, wdg),
Ihe ndị metụtara njikọ na njikọta njikọ (njikọ ụlọ).
Marketingzụ ahịa Ntanetị bụ usoro ngwa ngwa ma dị oke ọnụ. Anyị na-etinye ego na mgbasa ozi na nke a, anyị na-enweta ndị ahịa ọhụrụ. Ha na-enweta mgbasa ozi, anyị na-edebe data ha, anyị na-agaghachi na ha, ha na-azụta ngwaahịa anyị.
Na-eduzi mkpọsa mgbasa ozi na Intanet na Social Media.
ROI (nloghachi na ulo oru mbo, laghachite na ulo oru mbo).
Marketingzụ ahịa na ekwentị (tima Ọkwa).
Ugwu Na-eto Eto - Ọ bụ naanị Ọganihu Mkpa Ọganihu Maka Business Gị
Anyị ga-eme ndokwa na nzukọ ahụ.
You nwere obere azụmaahịa? - Kpọọ m na m nwere ike inyere gị aka! (Na-atụ aro obere ego)
M ga-elele azụmahịa gị + Nwee ezigbo ndị ahịa
Ị nwere azụmahịa ọkara? - Anyị ga-emepe ya ọnụ! (Anyị ga-elekwasị anya na ịme mpi + Email Marketing +)
Ị nwere nnukwu azụmahịa? - Ị na-enweghi obi ụtọ, ị ga-ehichapụ ọtụtụ!
(Anyị ga-azụlite ya na mba nile - n'etiti ndị ọzọ m lụrụ ọgụ na Dubai, London. India, Indonesia - Anyị na-arụsi ọrụ ike 24H - 7 ụbọchị n'ozuzu ya dum.
Lelee m, Tinye na Google: Dubai City Company
Na mgbe ahụ ị ga-ahụkwa etu m siri rụọ na Linkedin, Facebook, Twitter na Google.
Bido onwe gi na ntaneti ihe ntaneti n'inweta na Intanet & data nyere aka na ntule m na mmepe nke ndi oru m ahia.
Ọ Dị mma, Buru ihe na-enweghị isi. To abịala na saịtị m n'ihi na ị ga-achọ ịmụ ntakịrị ibido biri na mpaghara Gulf, tumadi na United Arab Emirates.
My ụlọ ọrụ a na-akpọ Dubai City Company na m na-akpata ezigbo ego ruo ọtụtụ afọ na ezigbo ezigbo ego na Emirates, Saudi Arabia na Qatar.
N’ezie, anyị na-enweta ego iji nyere ndị ọzọ aka. O nwere ike iju gi anya, ma oburu na I nyere ndi ozo aka. ị ga-enwerịrị ihe ịga nke ọma na ndụ.
Ịmalite ụlọ ọrụ ahịa gị kwesịrị icheta ihe ole na ole. Ihe mbụ kachasị mkpa ị ga-elekwasị anya bụ oge gị, kama ọ bụ enweghị ya.
O di nwute, ahia nwere gi onwe gi na obughi enyi gi. Anyị bụ ndị na-ere ahịa na-azụ atụrụ mgbe ụfọdụ karịa elekere 18. Arụrụ m ọrụ ọtụtụ oge Ahụ́ esighị m ike ma ọ bụ ghara inwe ume. N’ezie na ị dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa n’ọdịnihu, ọ dị mwute ikwu na ị ga-eme ihe ahụ m na-eme. Ruo ugbu a ka m na-ewu Citylọ Ọrụ Dubai City.
N'ezie, ụlọ ọrụ ahịa nwere nsogbu na mgbada. Atụla anya na coconuts maka afọ mbụ nke ụlọ ọrụ gị. Naanị mgbe otu afọ gachara, ị ga-ahụ ego a zụtara n’akpa gị.
Ị ga-ahụ na ụlọ ọrụ gị ga-adịwanye na Google. Ọtụtụ ndị mmadụ ga - achọ aha gị ma chọọ ọrụ gị na netwọk mmekọrịta nakwa na mgbasa ozi.
N’afọ nke atọ nke ụwa mebere gị, ị nwere ike ịtụ anya inweta uru, sịnụ, USD 10,000 kwa ọnwa. Na o yiri ka ọ bụ ezigbo ego, mana ọrụ ị tinyere na ụlọ ọrụ a ma ọ bụrụ na ị kesaa ya maka otu elekere ga-abụ ihe dịka 2 USD kwa elekere. Nke ahụ bụ ma ọ bụ na-erughị nkezi ọnụahịa ụlọ ahịa na-arụ ọrụ na Romania.
O bu ihe nwute, igaghi eche na igha ezi ego na elekere otu gi na ahia. Kama, should kwesịrị ịtụ anya ịrụsi ọrụ ike maka ụgwọ ọnwa dị ala. Iji malite azụmahịa, ịchọrọ naanị Bochum ngalaba na obere mmanụ n'isi gị.
Bụrụ onye nwe ya siri ike ịrụ ọrụ!
Itiondebe azụmahịa gị ma wuo akara gị bụ ọrụ siri ike. Ihe kachasị gbakwunye azụmahịa dị n'ịntanetị bụ na ị nwere ike ịme ihe masịrị gị n'oge ọ bụla. Kwesighi ịrụ ọrụ n'ehihie ị nwere ike ịrụ ọrụ n'abalị. Ọ bụrụ na ijiri idozi azụmahịa gị na Google, n'ezie, ị ga-enwe ike ifegharị njem mba ofesi.
Ịga ụwa ma na-egwuri egwu bụ uru na nkwekọrịta. Iji wuo otu ụlọ ọrụ na ịntanetị nke ọma, ịchọrọ n'etiti 5 na 10 afọ.
Eziokwu dị oke nke na ị naghị arụ ọrụ otu afọ na kọmpụta wee zụrụ onwe gị Bentley na Villas mara mma, ọ dị nwute, ọ bụ ihe mgbu karịa na ị ga-arụ ọrụ ndụ gị niile na mmalite ga-abụ ihe ịtụnanya ị gaghị ehi ụra n’abali ọ bụla, ị ga-azụ teepu nwere akụkụ abụọ iji gluu anya gị nke elu iji gbochie ma dobe ha.
Yabụ n'eziokwu na ọ bụ ọrụ siri ike ịme ma nke ahụ ezughi na ụlọ ọrụ gị na ọ gaghị ezughị imefu ego ahụ. Na-achọ inweta. Isi ihe ọzọ ga-abụ oge na ohere nke imeziwanye. To ga-agbasi mbọ ike ma na ị ga - ejikwa onwe gị ma n’ezie, kpali onwe gị n’ụzọ siri ike.
Ọmụmaatụ, ọ bụ ụlọ ọrụ obodo Dubai. Ewuru m nzukọ a ogologo oge. Amalitela m azụmaahịa a aha dị iche ọ bụ cV ebugharị ọrụ mba ofesi. Mgbe ahụ ụlọ ọrụ ahụ gbanwere aha ya na ụzọ ya ka ọ ga n'ihu dị ka azụmahịa. Akwụ ụgwọ ahịa azụmaahịa a kemgbe afọ 10 ikpeazụ.
Y’oburu k’achia ike n’atu ya ibulite onwe gị ma ị na-agba ọsọ kwa ụbọchị. Enwere ọtụtụ ihe ga - esi na oge gị na ezinụlọ gị na ụlọ ọrụ ị ga - agbaso, ị ga - emerịrị ya n'onwe gị na mmalite.
Ana m echeta onwe m afọ ole na ole gara aga, emejuola m laptọọpụ azụma a ma ebe ọ bụ na mgbe ahụ na-aga n'ihu na ezi ụzọ. Ana m achọ ịkpata nnukwu ego karịa enweghị ike iche n'echiche. N’ezie, etinyela m puku kwuru puku nke mgbasa ozi facebook na Linkedin. Nke ahụ, n'ezie, na-eme ka m nwee ụlọ ọrụ kwụsiri ike na Ahịa Dubai.
N’aka nke ọzọ na azụmaahịa ahụ dịka azụlite ego na ịre ahịa, ọ ga - enyere aka ị ga-ewu oge nke gị na ọdịnihu gị. Want chọrọ inwe ike ịnweta ihe, Eme, oge ịchọrọ ime ịhụnanya. Madu gha haziri gi ihe.
Yabụ na nke ahụ bụ nke dị mma ma na-eche echiche maka iwulite azụmahịa n'ịntanetị. I kwesiri icheta ndi Arab Emirates ha abughi ihe di nfe a na-eme ahia? Yabụ tupu ịmalite azụmahịa gị ị nwere ike doobie narị pasent n'aka nna na ị maara niche gị yana ahụmịhe zuru ezu ị nwere Bilie ma bido ịmalite azụmahịa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ụzọ kachasị ọsọ iji malite azụmahịa nke gị bụ ịmalite site na mgbasa ozi mmekọrịta. You nwere ike ịkwalite ngwaahịa gị taa ka ndị ahịa buru ibu ma ọ bụ ndị enyi gị. Ha ga-emeputa otu ahia ya na ndi ahia ndi ozo bido kọlu ụlọ ọrụ gị ma na-arịọ maka ozi ndị ọzọ.
Nke a bụ ụzọ kachasị ọsọ na ụzọ kachasị mma iji wuo ọdịnihu ma ị dị ndụ dị mma. Dịka ị nwere ike iso ụlọ ọrụ m na ntanetị ị ga-ahụ na akụkụ bụ isi anyị bụ Facebook na Linkedin. Sitekwa ebe ahụ anyị na - enweta ezigbo ndị ahịa na anyị nwere ike zụọ ha ma nyere ha aka inweta ọrụ na United Arab Emirates.
Ego ole ka ị nwere ike ịntanetị?
businesszụ ahịa n'ịntanetị n'eziokwu ọ bụghị azụmahịa kachasị baa uru. Mana ọ ga - otu esi eme ihe dị ka $ 5,000 kwa ọnwa ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ ihe dị ka elekere asatọ ruo 10 kwa ụbọchị. Yabụ ọ bụrụ na anyị ewere nke ahụ, anyị ga-atụnyere ụdị ego a ka ọrụ ọkọlọtọ. Ọ bụ ezie na otu ụzọ dị mma Imani na iji bie ndụ dị mma.
Azụmaahịa n'ịntanetị dị ka azụmaahịa ahịa ma ọ bụ azụmaahịa mbanye ọ bụghị ụzọ iji mee nde kwuru nde ma ọ bụrụ na ị naghị aga taa ezigbo echiche nke inyere ndị mmadụ aka idozi nsogbu ha.
Companylọ ọrụ a jisiri ike na-eme ihe ruru narị narị dollar kwa izu. Mgbe ahụ kwagara puku kwuru puku dollar kwa ọnwa. Ma na ọ bụrụla ahịa na-aba uru. Ruo ugbu a na ugbu a azụmahịa a na-aga nke ọma nke ọma na nke ahụ abụghị nnukwu ọrụ ịrụ kwa ụbọchị. Ekwesịrị ime mgbe niile bụ naanị iji ndị ahịa na-ejere ndị ahịa ozi na-enyere ha aka inweta ihe ịga nke ọma na ọrụ aka ha.
Kedu ihe ọjọọ ọ bụ na ụlọ ọrụ ahịa nke onwe gị?
Ọtụtụ oge, nwunye gị agaghị enwe afọ ojuju. Mmalite ga-abụ ihe na-enweghị ihe o mere, ị ga-akwụsị iri nri ụtụtụ e dere banyere 15: 00 will ga-asa ahụ, ị ​​ga-amata na ịhapụghị nkịta ahụ ụnyaahụ. Mgbe ahụ nri a ga - anọ na 18: 00 ọ ga - abụ ọkara osisi mana nkịta gị ga - eme ahapụghị ụzọ ọzọ anaghị ehi ụra n'abalị, ndi agbata obi ga-akwụsị ịsị gị ụtụtụ ọma na ụmụaka ga - etiri gị mkpu n'okporo ụzọ na ị bụ Zombie.
Ma n'ezie enweghị ude ga enyere ike nwanyi obula agaghị enyere anyị aka na ihe anyị na-ekwu. Ọ fọrọ nke nta ka ị ghara inwe nwunye. Mgbe nwunye ị hụrụ n'anya jụọ onwe gị ?. Kedu ihe na-agbagha n'ụlọ ahụ mgbe ozi 15 zigara ndị ahịa ahụ.
Ma ịchọrọ ịnye email gị na ntanetị gị mgbe ị ga-etechaa anya iji hụ ya na mbido corridor n'ihi na ọ dị mwute na ị nweelarị anya site na kọmputa.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ị na-anakọta echiche ịzụta malite na ụwa nke mebere ibido jiri nwayọ mara onwe gị ajụjụ a nwunye gị jụrụ gị isi gị ga - amalite ịchọpụta na ọ ga - abụ azịza mbụ.
O nwere ike ibudata ihe n'izu n'iji akwa ikpu n'azụ ihe ndina ma n'eziokwu ebe niile zara ọnụ ọgụgụ 3 Ị bụ nkịta.
Oge ọ bụla na - esote ga - aka njọ, mana oge ga - abịa, ị gaghị enwe ichere ya ogologo oge mgbe ị hụrụ na steeti akaụntụ gị ji nwayọ malite ịkwaga, ihe ijuanya na ọ bụghị ego ezigara n'aka mama gị. ị na-amalite ịhụ ihe ọrụ gị pụtara wee hụ na ọ na-anọdụ na kọmputa ma nwee ọtụtụ mkpụrụ. Mgbe oge ụfọdụ ahụghị ọrụ gị ọ hụ ọ gụọrọ m gị na ngwaahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ gị na-amalite inweta ọnọdụ kacha mma na ọkwa Google.
Ma n'ezie ndị mmadụ na-achọ gị na mgbe ndi mmadu achoro ihe ichoro na otutu ndi di ka gi. Ha dịkwa ka gị Anaghị m egosi Zombie. Yabụ, ndị mmadụ na-achọ ngwaahịa ị nwere ike inye ha ma ọ bụ aka ọrụ, ị ga-eme ego n ’ụlọ ọrụ azụmahịa gị.
Nke a bụ oge mgbe ị ga-eteta na kọmputa a. I si na komputa bulie, bulie isi gi n’ime ulo Ọ dị gị ka ụzarị ọkụ anyanwụ metụrụ ihu gị na mberede ị ga - amata na ọ bara uru na min ọ bụla.
Have nwere ezigbo websaịtị nke ọma, azụmaahịa ahaziri nke ọma, ma nke kachasị gị mkpa bụ ị bụ onye isi ihe niile ị mere ihe ị kpụrụ naanị nwunye gị na ọ nweghị onye nwere ike iwepu ya, ị ga-efunahụ peeji ahụ, ihe ọmụma gị ị nwere ga-enye gị ohere ịmepụta azụmahịa ọzọ dị ukwuu.
Gịnị mere Dubai ji dị oke oke maka ọrụ SEO?
Dubai bu ebe kachasi nma ndi mmadu mebere ya. Nke a bụ ya mere ụlọ ọrụ anyị ji enyere ndị ọrụ ahụ aka inweta ọrụ ọhụrụ enwere ike na United Arab Emirates.
Ndị otu anyị enyerela aka ọtụtụ puku mmadụ gburugburu ụwa. Ukwuu anyị na ndị India bi na ndị na-asụ asụsụ Arabik na asụsụ Farsi. Yabụ ọ bụrụ na ibi na Europe ma ọ bụ United Arab Emirates anyị nwere ike iji nyere gị aka ma nye ọrụ gị na mpaghara Gulf.
Obodo Dubai bụ nnukwu ihe ebe n'ihi na inwere ike inweta ọrụ dị ịtụnanya ma bulie gị ọsọsọ. Isi ozo di nma nke ahu bu ebe kachasi nma maka ndị ọgbọ bụ na ebe a dicha mma maka inweta ọrụ egwuregwu ngwa ngwa karịa ebe ọzọ na Gulf.
Nke ahụ bụ otu puku ụlọ ọrụ nke ọma inwere ike inweta ọrụ ma jikọta ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ ị nwere ike isonye na profaịlụ Njikọ anyị ma aga m Facebook peeji nke ụlọ ọrụ. Site na isoro profaịlụ ụlọ ọrụ anyị ị nwere ike nweta ọrụ dị iche iche na-enye ma jikọọ na ndị ọzọ ndị na - achọkwa ọrụ dịka ịchọrọ.
Ụlọ ọrụ dị na Dubai
Companylọ ọrụ a bụkwa ezigbo akara Dubai na ebe nrụọrụ weebụ ha ị nwere ike inwe ezigbo kọntaktị ma ị ga-emekwa hey boo 2 hụ ihe ha na-eme n'eziokwu na azụmahịa. Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Automotive a Ihu Dubai di iche na mpaghara Gulf ọ ga - enye gị ụzọ isi maka ụdị ọkwa ọrịre ọhụụ nke ọkwa ma ọ bụ ngalaba injinịa.
Welllọ ọrụ Atwell dị na Dubai. Ihe ngosi a bu ahia ahia ahia zuru oke. Ọzọkwa, nzukọ a na-akpọ ndị mmadụ gburugburu ụwa. N'ihi ya, n'agbanyeghị ebe actually si n’eziokwu bịa n’onwe gị ị ka nwere ike isoro ha rụọ ọrụ. Dị ka anyị niile maara na 80% nke ọrụ ọ na-abịa India na Pakistan. Nke a bụ ihe mere na agbanyeghị nke ma ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịbanye site na Dubai. Still ka nwere ohere ma biko tinye na websaịtị ha. Ka ọ were ga-enye gị Haygood nka ọhụụ na Dubai.
Nke a ohuru bu ezigbo ahia, ma otutu ndi oru m enweghi ike inweta ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ahụmịhe, ị ga - enwe nhọrọ ma ị ga - enwe ike iji nweta ọrụ ya mere. Companieslọ ọrụ ndị a na-akpọ ndị isi na-ahụ maka ọrụ na ndị isi ala ọrụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmịhe, ị ga - enweta ohere iji soro ụlọ ọrụ dị ka nke a rụọ ọrụ. Onwere njikọ enyere n’elu ya ma biko kwuo okwu na ya mgbe ahụ ha ga-eburu gị gaa na ngalaba ọrụ. Nwere olile anya na ị ga-enweta ọrụ dị ịtụnanya na United States na ụlọ ọrụ a.
Super maara nke ọma nzukọ. Ihe ntanetị na-enyocha naanị ịhụnanya na ụlọ ọrụ a. Yabụ na ị ga - enweta ohere na ụdị dị iche iche dịka nke a. N’ikwu ya, ụlọ ọrụ na-eweta ụgbọ ala na-enye ndị ọrụ ha ụgwọ ọrụ bara nnukwu uru mgbe niile. Na I nwere ike ịtụ anya ọzụzụ nke ọma na ịnwe ọzụzụ ya nke ọma.
Ya mere ichota ihe eji eme ihe ohuru bu ezigbo akara aka nye ndi choro oru na ndi mmadu n’eme ka ichota nzikọ ntaneti. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ị bụ na-ele anya ijikọ ndị bi na Dubai. Jiri ngwa anyị ma kpọọ ndị mmadụ ka ha depụta ndepụta email gị. Anyị emepụtala usoro dị mfe. Yabụ ihe ị ga - eme n'eziokwu bụ ị ga - aga Gmail ma ọ bụ Hotmail. Mgbe ahụ ibupu ozi ịntanetị na listi email gị.
Gachaa ngwa nke kacha nta n’ime ụlọ ọrụ anyị kpọọ onye ọrụ ọ bụla. Ga-ezitere gị akwụkwọ ịkpọ oku na-akpaghị aka maka ịmara onye ọrụ ụlọ ọrụ obodo. Yabụ ndị ọzọ ịdebanye aha na Dubai ma ọ bụ ibi na United Arab Emirates.
Enwere nnukwu ohere. Ndị ọzọ nwere ike nwee mmasị isonye na ụlọ ọrụ obodo Dubai. Na ihe ị ga - eme bụ naanị inye ha ohere ịme ya na Smart Way site na iji ọrụ ụlọ ọrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị ewere ihe atụ 4 bụ ezigbo mmadụ nke na-enwe 300 ruo ndị 500. Onye ahụ ga-akpọ ndị enyi nke ha na websaịtị anyị. Mgbe ah ọ ga-abụ uru ekwesiri ịbanye na weebụsaịtị anyị.
Agbanyeghị, ụzọ kachasị mma iji nweta ma kpọọ ndị enyi gị na Dubai. Ọ na-aga na profaịlụ LinkedIn. Na nke ahụ bụ usoro dị mfe iji bupụ ndị otu BTS ndị enyi gị na mgbe ahụ ziga ozi nnabata ha kwa. Yabụ otu a, ọbụghị naanị ihe ị n’enweta kamakwa nke sitere na igwe mgbasa ozi. Nke ahụ ga - enyere gị aka wulite akara gị ma gosipụta na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ebumnuche ụlọ ọrụ Dubai obodo bụ iji nyere ndị mmadụ aka ịbanye na mpaghara gulf. Yabụ na-ekwukarị okwu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ijikọ ndị nwere mmasị na United Arab Emirates, Saudi Arabia na Kuwait. Anyị ụlọ ọrụ ọ bụ ihe zuru oke nke 4 maka mkpa gị.
Nice-rue mgbe ebighi-ebi Vintage Leopard Edere Ọrụ vestidos Cold Jirin na Bow Business Party Bodycon Office Women Uwe B483
gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 20 ahịa Fim
Nice-ruo mgbe ebighi-ebi Vintage Elegant Contrast Agba Patchwork Wear to Work vestidos Business Party Office Women Bodycon Uwe B463
5XL 6XL Mgbụsị akwụkwọ Mgbakwasa Uwe Mgbakwunye 2019 Casmụ nwanyị Ikike Casult Nime Workdị Ọrụ Uwe Nwanyị 4XL Nnukwu condị Ahụ Ahụ Partycon.
Olile anya Ibi ndu bu ihe di n’aga n’ihu. Yabụ na ị na-akpọku ọtụtụ ihe na ụlọ ọrụ anyị nyere ha aka ịchọta ọrụ iji mee ka ụfọdụ ndị na - elekọta mmadụ mgbasa ozi na obodo Dubai. Biko echefula ịkekọrịta ma nwee mmasị na post anyị. Otu a ka ndi enyi gi g’enwe ike ihu ihe ị na eme na ntaneti na ike isi ike na-agba mbọ nweta ọrụ na Dubai.
Ọrụ na Marketing
SEO na ọrụ N ’ire ahia nke aka gi? Amalitere m azụmaahịa m dị obere. Mgbe m dị afọ 21 na ọkara, amalitere m azụmaahịa mbụ n'ịntanetị.
Ị ma ihe ụlọ ọrụ m mbụ?
Ọ bụ Led Multimedia. Emepụtara m ụlọ ọrụ n'ihi na enweghị m ike fachọta oru di ezigbo uto n’oge a. Ugbu a, m nwara ịchọta ọrụ a kwụrụ ụgwọ na Europe na Middle East !.
Dịka i nwere ike ịkọ, o mezughị, eziokwu mechara m, emesịkwa m etinye aka na Led.
Anyi choro ighota ugbua iji mee ka ndi mmadu kwatuo ahia. Na ịkwalite nnukwu ụlọ ọrụ na Marketing ... ndepụta na-aga n'ihu.
Echeziri m banyere 250,000 USD
Ma ọ bụrụ na m ga - ebido ihe niile site na mbido, Kedu ihe ị chere ga-eme?
Tupu m erute nke ahụ, ka anyị buru ụzọ kwuo banyere ihe m chọpụtara n’azụ oge ahịa m ọrụ na Dubai…
Gịnị ka Ana m amụta n’azụ oge n’ọrụ m? Ebe nrụọrụ weebụ na-akpọ SEO. Yabụ m ga-ekweta na m dị mma n'otu ihe na naanị otu ihe. Na Azụmaahịa Internetntanetị
Ugbu a, m na-eduzi okporo ụzọ weebụsaịtị na ndị ahịa m.
Ihe niile dabere na ụlọ ọrụ ebe saịtị ahụ dị, enwere m ike ịdọta okporo ụzọ na ime ka ọ mara. Nke kasịsị mma, enwere m ike ime ya n'enweghị mgbasa ozi.
Ma n'ihi na enwere m ike ime otu ihe, ọ pụtaghị na m nwere ike ịmepụta azụmahịa na-aga nke ọma. Achoputara m banyere ya na 2015. Achọrọ m ndị ịtụnanya gbara m gburugburu.
Ọ dị mma, mgbe ọdịda mbụ nke ụlọ ọrụ ahịa mbụ m gwụsịrị. Ekpebiri m ịbụ onye njikwa, mụ gara US.
Enwetara m ọkwa onye isi na Ireland, m kwagara London. N’otu n’ime ụlọ ọrụ ego, enwetara m ọzụzụ n’ịzụ ahịa.
Ndị kere Disneyland bịakwutere anyị. Amụtara m mgbe ahụ otu esi wuo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ akara mba ofesi.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe m malitere na-arụ ọrụ na Dubai Marketers, nke m azụmaahịa malitere itolite.
Ekem m nwetara banyere 350,000 USD
N'iso ndu a, m wuru ụlọ ọrụ ntanetị na Dubai. Agbanyeghị, amaghị m otu esi akwalite ya ?. John West wetara echiche ahụ maka ịchọta ndị nwere mmasị n'ozi m.
M wuru Dubai City Company na Linkedin
Ejisiri m ma jiri azụmaahịa dị n'ịntanetị malite. O were ihe dị ka ọnwa 6. Na imegide usoro eke nke matriks. My ụlọ ọrụ bidoro irite ego a kapịrị ọnụ.
Mgbe ahụ akwụsịrị M Mbụ Nde Mbụ Mbụ
Enweela m ezigbo ego n’ime ihe karịrị otu afọ. Kedu ihe ị ga - emefu na ụdị ego a? ụlọ nri dị oke ọnụ, ụgbọ egwuregwu, njem ndị mba ọzọ, Quads na ebe nzuzo na SPA maka ezinụlọ.
Ma n'oge gara aga,
Enwere m onye isi nchịkwa nke akụkụ nke ụlọ ọrụ ego, ọ dịghị onye ọ bụla m chọrọ ime.
Ndị ọgaranya ma ọ bụrụ na ha enweghị oge, ha ga-ahụ onye ga-eme ya.
Ị hụrụ, ọtụtụ ndị ahịa, ndị na-azụ ahịa azụghị akwụkwọ na ndị a abụghị ndị isi n'ozuzu ha.
Ọtụtụ n'ime ha dị ezigbo mma n'inwu ìgwè dị ike ma na-azụ ndị ezi mmadụ.
Nke kachasị mma, ha nwere ike ime ya na oke ego.
Nke a bụ nkà ya kacha mma!
Anọ m na ndị isi njikwa sitere na London na Dubai na-arụ ọrụ
Na-arụ ọrụ na ndị ọrụ kacha mma site London, Dubai, New York. M ngwa ngwa ghọtara na n'agbanyeghị otú ị maara, ị dịghị ewu ụlọ ọrụ buru ibu ọ gwụla ma i nwere otu ndị nwere nkà.
N’ezie, inwere ike iru nde mmadu n’onwe gi, ọ bụghị nnukwu ihe na ịzụ ahịa. Mana o siri ike inweta, sịnụ, dọla 500,000, ma ọ bụ ọbụna 1,500,000 dirhams otu afọ na nkwụghachi ụgwọ n'enweghị ndị otu na ndị ahịa ahịa dị ịtụnanya.
N'ezie, ndị mmadụ ga-enyere gị aka ma zụlite azụmahịa gị ngwa ngwa. Kwupụta n'ihu ọha, ya na itinyekwu ụbụrụ, na-ewere na ị họrọ ezigbo ndị mmadụ, dozie nsogbu ọsọ ọsọ ma hụ ego sitere na ego ị na-enweta.
Ya mere, gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na m ga - amaliteghachi?
Agụụ, ihe ọmụmụ ndụ dị n’elu bụ otu n’ime ihe mmụta kachasị sie ike m kwesịrị ịmụ. Amụtakwara m ya n’oge ke ọrụ m.
M kwesiri ime ya na afọ 18?
O doro anya, mana mgbe ịmalitere dị ka onye ọchụnta ego ma ọ bụ okenye, ị na-emehie ihe (mgbe ụfọdụ nnukwu) ị nwere ike ịmeghị ma ọ bụrụ na ibido. njem nke ịchụ nta ego mgbe obere oge gasịrị.
Ya mere, gịnị ka m ga-eme?
Ọ dị mma, aga m etinye 9 mbụ afọ nke njem m na-azụ ahịa n'etiti ụlọ ọrụ azụmaahịa na-eto eto.
N'ime afọ atọ mbụ, aga m etinye oge m na ezigbo onye ọchụnta ego na Teknụzụ. Ma ọ kachasị mma na enweghị m nnukwu ego ọzọ. N'ihi na oru ndị dị otú ahụ siri ike ma ghara ịmalite dịka ụgbọ mmiri rọketi.
Ihe kpatara na agaghị m ahọrọ obere azụmaahịa na-eto ngwa ngwa bụ na akụkụ kacha sie ike bụ arụmọrụ ụlọ ọrụ.
N'ihi nzọụkwụ ọzọ na mmepe ya. Workingrụ ọrụ na ụlọ ọrụ nwere nrụgide dị egwu n'ihi ọrụ nke oge ma ọ bụ enweghị obi ụtọ.
Can nweghị ike ịmasị ma ọ bụ chịkwaa ihe, nke enwere ike ịchịkwa ya naanị na ụlọ ọrụ nwere nnukwu ego. Themalite amalite izi ihe gi ihe okike na agha maka mmeri.
Ịmalite ịzụ ahịa ị ga-amụta ndụ ahịa.
Mgbe afọ 3 mbụ nọrọ na obere ụlọ ọrụ, m ga-anọ afọ abụọ na-esote ka m rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ajụ ase na US ma ọ bụ London, nke irite ma ọ dịkarịa ala DH 10 nde ma na-eto dị ka oriri n’ọchịchị mgbe emechara vootu.
Nke a ga - enyere gị aka ịghọta ụdị ụlọ ọrụ na - eto ngwa ngwa. Yabụ ka ị bụrụ onye ọkpụkpọ mbụ. Mana. n'ezie ọ ga-agwa gị na azụmahịa adịghị ok, ọ dị unyi ma sie ike.
Mgbe ahụ, e nwere canola maka ịda mbà n'obi
Ọtụtụ ihe na-ada ada, okenye ka ọ bụrụ onye njikwa ma ị daa n'ihi na ị na-etolite n'ike n'ike. Egwuregwu chọrọ oge na mgba.
N’ezie, ị ka nwere ike ịmụ ihe dịka akụ na ụba, ma ọ bụ ịnwere ike isoro ndị mmadụ dịka ahịa na njikwa. Mana lee, ịmalite ịmalite ọtụtụ ọrụ.
Mgbe afọ 2 na-esote, ịkwesịrị itinye afọ 2 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ajụ ase. Karịa ma ọ bụ na-erughị, ụlọ ọrụ na-emepụta ma ọ dịkarịa ala otu narị nde ego ha na-akpata kwa afọ, mana erughị ijeri Dirham.
Companieslọ ọrụ dị n'etiti ndị dị iche na mmalite!
Ọrụ ndị ahụ na-echere ụlọ ọrụ ndị nwere ọkara dị iche na obere ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ. Ma ịnọ n’otu n’ime ụlọ ọrụ ndị a, afọ ole na ole ị na-amụta ihe niile site na mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, otu esi eme ka ụlọ ọrụ na-adịghị ngwa ngwa, ọbụlagodi iche echiche banyere nnukwu foto.
Yabụ kedu ka ụlọ ọrụ buru ibu, dịka ọmụmaatụ, Dubai na London si achọ nnukwu ahịa, n'ihi na ha maara na ọ dị mfe ịnweta 10% nke ụlọ ọrụ kwesịrị ọtụtụ ijeri Dirham dịka ọmụmaatụ na UAE karịa inwe 50% nke ụlọ ọrụ ahụ ruru ọtụtụ nde zlotys na Europe.
Afọ ikpeazụ nke aka oru m, M ga-anọ na nnukwu ụlọ ọrụ dịka Onye njikwa ma ọ bụ osote onye isi. Mgbe m kwuru "nnukwu ụlọ ọrụ", m na-ekwu maka ụlọ ọrụ bara uru karịa Dirhams 10, Orlen, na kachasị mma ọbụna na ahịa ọha na ahịa.
Kedu ihe m ga-eme mgbe afọ 10 rụchara ọrụ dịka onye ọrụ?
Ebumnuche dum nke ọrụ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị nwere ọgụgụ isi bụ ịnweta ndị ndụmọdụ kwesịrị ekwesị mụta ezigbo azụmaahịa ụwa.
Itinye aka n’achughi ahia adighi ka otutu mmadu si eche. Ga nke ọma dị mfe iji nweta ọ dịkwa ka ị pụrụ icheta ọtụtụ ndị na - eme ihe ịga nke ọma na Instagram. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụkwa ha na TV, ha gbalịa ree onwe ha na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ na telivishọn.
Isi okwu banyere ọrụ dị na Azụmaahịa
Ndi oru itumgbere ahia, ulo nke aka na onodu weebụsaịtị na UAE dị mma ma dị ịtụnanya. Agaghị m agbanwe ya maka nrọ ọ bụla ọzọ.
ma tupu ị pụọ ma bụrụ onye ọchụnta ego, mụta n’aka ụlọ ọrụ nha niile.
Ịbụ onye CEO abụghị ụzọ dị mfe, ihe ikpeazụ ịchọrọ ime bụ ọdịda n’ihi umengwụ gị n’ihi na aha gị bụ naanị ihe ị nwere.
Na-arụ ọrụ na ọnọdụ siri ike ruo afọ ole na ole na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ị ga - abawanye ohere gị ma ọ bụ nwee ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ gị.
Ma mgbe ị dị njikere ịga nke onwe gị, ka anyị nwee olileanya!
Ọ bụ nhọrọ amamihe dị na ya ịmalite site na ndị ọrụ mmekọrịta dị ịtụnanya mgbe ị na-ewu ụlọ ọrụ n'ihi na ọ na-ewe oge buru ibu na isi obodo iji aka gị niile mee ya.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị maliteghachiri ọzọ?
Oru aka na ahia na SEO
Kpọọ taa ma dozie ọnụego n'efu anyị ga-ekwu banyere Ahụmịhe gị!
Ka anyị kwuo banyere azụmahịa gị!
Ọnọdụ Dubai City peeji nke dị n’ahịa mpaghara. Onye anyi huru n’anya Ndị bi na Dubai bi n'otu obodo. Ọ dị mma, ọ fọrọ nke nta kewaa ụzọ abụọ nke ndị bi na ya. Mpaghara mbu nke ndị bi na ya bụ otu na-arụ ọrụ n’ụlọ ọrụ edobere na Dubai, dịka ọmụmaatụ na ngalaba ndị agha nke ngalaba mgbanyụ ọkụ na uwe ojii.
Ndị otu a na-enwe ọganihu n'ụzọ dị mma n'ihi na ị ga-atụle ihe ngwaahịa na otu ị chọrọ isi tinye ebe nrụọrụ weebụ gị.
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ahịa nke ga-enyere gị aka ịghọta otú ahia ịntanetị na-arụ na Google. Ị gaghị akwa ụta ma ọ bụrụ na ị nye anyị ohere ma kpọọ nọmba ekwentị n'okpuru ebe a.
Marketing Marketing - M ga - enyere gị Aka ịkwalite Ponhazi na SEO in Dubai City
Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ dị iche iche na-ekwu maka idowe ebe nrụọrụ weebụ fọrọ nke nta niile na mpaghara Gulf. Dubai na Abu Dhabi bụụrụ anyị ezigbo obodo n'ihi na anyị nọrọ ọtụtụ afọ ebe a, anyị maara ihe na-aga n’ọhịa.
Ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọhụrụ dị na-etolite n'ahịa UAE, dịka ọmụmaatụ, mgbatị ahụ, ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị na ụlọ ahịa uwe.
Ọzọkwa ọ bụrụ na ị ga-achọ iti peeji ndị mbụ na Qatar na Kuwait. Asọmpi a agaghị adị oke na ohere azụmahịa gị ga-aba ụba nke ukwuu ozugbo ị nyere anyị ohere idowe weebụsaịtị gị na Top 10 Google.
Dubai bu ezigbo ahia mgbe ahia ndi ahia. Ndị ahịa anyị na-ajụkarị anyị maka ozi maka otu esi edobe weebụsaịtị na Abu Dhabi na akara ala Arab nke obodo.
N'ihi na ahịa a adịghị anya ma otu esi ama onye ọ bụla Dubai bụ obodo kachasị ukwuu ma a bịa mmepe mmepe na teknụzụ UAE.
Companieslọ ọrụ kachasị ukwuu nwere ọfịs ha ebe a, dịka ọmụmaatụ, Orange na Microsoft. Nwekwa ngwa ahia gi na UAE bụ naanị otu akụkụ nke anyị na-enye ndị ahịa anyị oge niile.
Akụkụ nke abụọ na-enyere aka n'ịkwalite ngwaahịa ha n'ahịa Dubai Arab. Companylọ ọrụ anyị buliri ọtụtụ narị ụlọ ọrụ n'ime Poland, US na Canada. Anyị rụkwara ọrụ na mba ofesi, gụnyere Dubai, England na Latin America.
Nhazi nke Dubai Ebe - Site na Anyị Ị ga-anọ na Top 10 Google!
Ọnọdụ anyị bụ usoro ngwaọrụ nke saịtị weebụ gị dị A ga-ahụ Dubai anya n'ime nchọta nchọta. Site na iji ụlọ ọrụ anyị, ị ga - enweta ọrụ ịdebere ọrụ nke ọma maka ebe nrụọrụ weebụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche etu ị ga-esi mee ka ụlọ ọrụ gị gosipụta na Top 10 na Google, gwa anyị ka anyị tinye ebe nrụọrụ weebụ gị. Companylọ ọrụ anyị nwere isi ụlọ ọrụ ya na Dubai ma nye anyị ọnọdụ kachasị mma weebụsaịtị abụghị naanị na mpaghara Gulf kamakwa na Poland, United Kingdom na mba ofesi dị ka Indonesia.
Kedu ka anyị nwere ike isi mee SEO maka gị na Dubai?
Companylọ ọrụ anyị na-eji naanị pụtara ụzọ dị mma iji etinye n'ọnọdụ Dubai. Anyị na-ekwe gị nkwa nsonaazụ dị elu na arụmọrụ kachasị na idozi nkebi ahịrịokwu kachasị mma na ngwa ọchụchọ dị ka Yahoo, Bing na Google. Companylọ ọrụ anyị na-anwa inyere ndị ahịa ya aka ịkwalite ngwaahịa ha na mgbasa ozi mgbasa ozi.
N'akụkụ aka nke ọzọ, Dubai nwetara ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ maka mgbasawanye Maxima, ọrụ ọhụụ maka ndị ahịa ọzọ. Atụmatụ ime obodo ọhụrụ anyị gụnyere sinima n’ebe ọhụrụ anyị.
Anyị na-akpọ gị òkù ịlele ụlọ ọrụ anyị na Google. Banye ụlọ ọrụ Dubai City Company ma wụpụ nke ọma na nhazi nke weebụsaịtị.
Ọmụmaatụ, anyị rụrụ ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị ka Naukri Gulf dị ka Facebook ma ọ bụ LinkedIn na ọbụna Twitter. Citylọ ọrụ Dubai City enyerela ọtụtụ narị ndị ahịa nọ gị aka kwa ụbọchị aka ịnata ozi na atụmatụ ọhụrụ maka idobe weebụsaịtị na Dubai.
Anyị ga-arụ ọrụ dị ukwuu maka gị na ịntanetị!
Ndị otu anyị ọkachamara na Dubai Career Market. Ga -emere gị kaadị azụmaahịa Google Map, n'ezie. Anyị ga-emepụta weebụsaịtị gị na Facebook na Twitter. Anyị ga-enyere gị aka zigara ndị ahịa gị zụrụ ngwaahịa gị ngwungwu ozi email.
Ọ bụrụ na i kpebiri isonyere anyị, anyị na-enye gị ụzọ dị iche iche ị ga-esi nwee afọ ojuju ka ụlọ ọrụ gị wee bido iweta uru na nke ị na-ahụta ka ọ bụ ọrụ siri ike. Anyị na-enye ndị ahịa anyị ihe ngwọta ọdịnala mgbe niile, dịka ọmụmaatụ, mkpọsa mgbasa ozi na Facebook ma ọ bụ nye aka n'ịzụta ndị na-eso ụzọ na Instagram.
E hiwere ụlọ ọrụ anyị na John West na Dubai ọtụtụ afọ gara aga. Kemgbe ahụ, anyị nwere nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị na onye anyị na ya na-arụ ọrụ nwere ezigbo ọrụ. Tinyere ihe ndi ozo, na Krakow, Wroclaw na Poznan.
Anyị nwere olile anya na ị ga-enye anyị ohere iji nyere gị aka gbasaa azụmaahịa azụmahịa gị. You hụrụ anyị n’ime ihe n ’ịchọ ihe ịntanetị ka iche n’echiche nwere ike ịsị na anyị bụ ndị ntụkwasị obi na ndị na-arụ ọrụ ike. Ọrụ Dubai na-etolite mgbe niile na ihe karịrị 30% nke ụlọ ọrụ ọhụrụ mepere ụlọ ọrụ ha na mpụga obodo Dubai.
Anyị Dubai nwere nnukwu azụmahịa na ikike akụ na ụba. Dabere na Google na Facebook, n'ime izu, a na-agbakwunye ndị 150,000 karịa n'obodo ahụ dị ka onye ọrụ nke netwọk mmekọrịta. Ọzọkwa, ọ bara uru na-eche banyere ike ịntanetị tupu ụlọ ọrụ ọzọ na-emere gị ya. Yabụ na Dubai, ọ ka nwere ike iweghara ahịa a maka na asọmpi a ezughi oke dịka dịka ọmụmaatụ na mpaghara Sharjah ma ọ bụ City City. Maka afọ 5 ruo 10 kemgbe ị gụrụ nke a blog. O yikarịrị, ụlọ ọrụ na-enye ngwaahịa ha ga-achị ahịa ahụ.
Gbasawanye ụlọ ọrụ na UAE na anyị!
Ya mere ị dị ka onye na-azụ ahịa chọrọ ụlọ ọrụ nwere ezi mkpali nke maara otú e si ewu ụlọ ọrụ azụmahịa. Na Dubai, a na-emepụta ọtụtụ egwuregwu na omenala ọhụrụ n'oge niile.
Yabụ na ọ bụghị naanị ndị a na-akpọ ndị obodo ma ha ga-enwe mmasị na ngwaahịa gị. Ma ndị mmadụ na-abịa ebe a maka egwuregwu ma ọ bụ ọgụ ịkụ ọkpọ na-ewerekarị ọnọdụ na UAE Arena.
Ọzọkwa, elele oge bara uru n'ezie were were mpi ma tinye ụlọ ọrụ na thentanetị na Dubai. Ebumnuche kachasị nke ụlọ ọrụ anyị ga-eme bụ itinye gị dịka onye isi ụlọ ọrụ na ahịa UAE. Na Emirates Enwere ọtụtụ ebe ị nwere ike ịntanetị site na ntanetị, dịka ọmụmaatụ ogige egwuregwu Arena Dubai. Mgbe ahụ, ọdụ obodo ebe enwere ezigbo nkwukọrịta nkwukọrịta na ebe ngosi ihe mgbe ochie ebe ọtụtụ mgbe ndị na-eto eto na-abịa njem ụlọ akwụkwọ.
Ọnọdụ ndị otu Dubai - Nye onwe gị ohere ịpụta na ụwa nke mebere. Nyefee azụmahịa gị na ịntanetị ma malite imeri ndị ahịa n'ịntanetị. Tinye ahịa na-abawanye uru.
Wedata onu ogugu Dubai. Bụrụ onye ahịa anyị na Dubai.
Ịdebe nke peeji nke Dubai? - Naanị ụlọ ọrụ anyị!
Anyị bụ ụlọ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ị nwere ike ịtụkwasị otu narị pasent. Ọ bụrụ na ịchọrọ ikwu okwu ma chọpụtakwuo ma ọ bụ nwere atụmanya pụrụ iche nke anyị kwesịrị ịma. Dubai City Company ji obi ụtọ na-akpọ gị ka ị kpọtụrụ ndị nnọchite ọrụ ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ọbụna onye nwe ya.
Anyị ga-aza ajụjụ gị niile. Anyị SEO na ndị ahịa ga - enyere gị aka ịhọrọ atụmatụ izu oke ma ọ bụ nke kachasị maka mmepe ụlọ ọrụ gị. John West ga-enye ndụmọdụ banyere otu esi enweta ndị ahịa si ịntanetị. Anyị na-atụfu obere mgbasa ozi n'ịntanetị na United Arab Emirates, Dubai Online ahịa. You're na-enwekwa ọ enjoyingụ na ndị ahịa ọhụrụ.
Will gaghị emechu gị ihu na isoro anyị. Anyị nwere ike ịgbakwunye gị na anyị abụghị ndị ọkachamara IT ọhụrụ, anyị niile nwere ezinụlọ, anyị makwaara ihe ọ pụtara responsiblebụ ọrụ na ntụkwasị obi na-arụ ọrụ na ndị ahịa. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka nri gị nyefere ụlọ ọrụ gị, anyị na-agba gị ume ka gị na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe karịa 30 maka ebumnuche doro anya.
SEO site na otu ìgwè anyị? Kpọọ taa ma mee ndokwa ọnụego!
Jikwaa ya na John West - Azụmaahịa Google - Anyị na-ebido SEO na 2009!
Ahịa na Google! - The Dubai City Company blog ka malitere. Blog anyị ga-abụ kpamkpam banyere SEO na Intanet Ịntanetị na Google na Social Media. Ọ ga-eme ka ndị mmadụ tinye aka n'itinye weebụsaịtị maka ịgbanwere echiche na aro echiche gbasara SEO.
Anyị na-akpọ gị òkù ịgbakwunye ihe, ajụjụ na curiosities. Kedu ihe anyị ga-ede banyere blog anyị?
Banyere ihe niile ụlọ ọrụ Dubai City na-eme n'ime Europe, London, Emirates na US Nke ahụ bụ ihe niile gbasara idobe ibe na Google. Akwụ ụgwọ AdWords ahịa, na-agbanwe ibe na maapụ Google. Anyị ga-ekwu ntakịrị banyere akụkọ sitere na ụwa nke mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa.
Anyị ga-anwa ịkọwara gị ntakịrị ozi gbasara ụdị ngwa ọrụ ọchụchọ na Poland na otu esi ere ahia na Google.
Ndị ọkachamara anyị ga-eji ihe ọmụma dị mfe na usoro ndị a nwalere nke ọma na ndụmọdụ maka ịkwado weebụsaịtị na mpaghara, dịka otu esi etinye ebe nrụọrụ weebụ na Legionowo? Na gbasara ozi metụtara ịntanetị na mgbasa ozi n'ịntanetị. Na nchịkọta - gbasara ihe kachasị anyị n'anya
N'okpuru ebe a, ị ga-amụta otu esi eji ngwaọrụ ahịa ọkachamara na otu esi eme ka azụmahịa gị na azụmahịa na ahịa na mpaghara ụwa. Anyị ga-enye gị ozi gbasara nhazi nke weebụsaịtị. Anyị nwere olileanya na ị ga-aghọta otú ọrụ ịntanetị na ngwá ọrụ ndị ị ga-esi jiri ya malite ịmalite njem gị na ahịa na Google.
Malite nhazi weebụ!
Mee ahia gi ọrụ Dubai!
Ahịa na Google?
A ghaghị kekọrịta Google Marketing na ngalaba dị iche iche na 13. Mana tupu anyị enweta nke a, m ga-edegara gị obere ihe gbasara Google ma ọ bụ ihe nchọgharị ntanetị bụ. Ya mere, Google, n'agbanyeghị nkwenye na-ezighị ezi, bụ Ngosi Nchọpụta maka isiokwu ọ bụghị ụlọ ọrụ azụmahịa. Nbudata nke Google abughi kwa ntughari nke onu ogugu. Ya mere, ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ahịa dị ọcha na Google, ọ na-akwalite ọdịnaya ziri ezi nye ndị nnata ndị nwere mmasị na ya. Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ ahịa Google.
Marketing na Google bụkwa nyocha nke data njirimara. Dịka ọmụmaatụ, otu esi enyocha data ma jiri nchịkọta Google. Ka ịbawanye ogo nke azụmahịa gị. Ihe na-esote nke ahịa na Google bụ ịnakọta na nyochaa data onye ọrụ iji mee ka ọ bụrụ ozi bara uru nke nwere ike imetụta mmepe azụmahịa gị.
Ee. 1. Nchịkọta Google na nyocha data
Ị nụ ozi banyere Google Analytics bụ ngwá ọrụ ndị ahịa na-eji na-eleba okporo ụzọ gaa na saịtị gị site n'ọtụtụ ebe. Google na-enye ngwá ọrụ ebe ị nwere ike ịlele ọnụọgụgụ ndị mmadụ ugbu a na ebe nrụọrụ weebụ gị. Tinyere ihe ndị ọzọ, ezigbo oge, yana ị nwere ike ịlele nyocha, ebe, isi nke nleta, ọdịnaya, ihe omume ma ọ bụ mgbanwe nke sitere na ọnọdụ ma ọ bụ mgbasa ozi Google ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ.
Iji tinye mkpokọta weebụ gị na nchịkọta Google ị ghaghị inwe Google Gmail. Ị nwere ike ịmepụta ya n'okpuru dị pịa foto ahụ.
Mgbe ahụ, anyị abanye na akaụntụ Google Analytics anyị ma mepụta akaụntụ ọhụrụ iji tinye saịtị anyị.
Ozugbo anyị mepụtara akaụntụ na nchịkọta Google, wee pịa nchịkwa. Iji budata koodu dị na weebụsaịtị Google Analytics ma jikọọ ya na weebụsaịtị anyị. Nke a ga - enyere anyị aka ijikọ ma soro ndị ahịa anyị iji weghachite data gbasara ọnụnọ ha na weebụsaịtị anyị.
Na dabere na nsonaazụ anyị na-enweta na Google Analytics, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere mmasị na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ọ bụ naanị iji lee anya wee pụọ. Google chere na na onye ahịa kwesịrị ịnọ ihe dị ka nkeji ma ọ bụ karịa na saịtị anyị ka igwe engine wee mata ya dịka onye ahịa bara uru.
Ọzọ, anyị na-ebudata koodu nchịkọta nke anyị ga-ebudata na Google Analytics
Dịkwa mma, yabụ anyị nwere koodu nchịkọta Google nke ga-eso onye ọ bụla bịara na weebụsaịtị anyị. Ugbu a bụ oge itinye koodu a na weebụsaịtị gị. Imirikiti webmasters na-eji WordPress dị ka ikpo okwu nke iji wuo weebụsaịtị. Tumadi n'ihi na ọ na-eche nke ọma ma na-emelite ihe niile emelitere.
Na-eche nche mgbe nile na Google, ọ bụkwa nyocha data sitere na nyocha ọchụchọ.
Ya mere, anyị na-pịa isi menu WordPress. Tinye ngwa mgbakwunye ọhụrụ. Mgbe ahụ, anyị na-achọ otu n'ime plugins ịhọrọ.
Kasị mma bụ: Google Analytics Dashboard maka WP site ExactMetrics (nke bụ GADWP n'oge gara aga)
Anyị na-etinye ma na-akwado ngwa mgbakwunye na WordPress
Ekele, ngwa mgbakwunye gị kwesịrị ugbu a na-arụ ọrụ na mkpado. Site na echi ị ga-enwe ike ịgbaso ndị niile na-aga na ebe nrụọrụ weebụ gị.
N'ihi Google Analytics, ị nwere ike ịlele ebe ndị ahịa niile na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ha enweghị ike ịbụ na Google, ha nwekwara ike ịnwe site na ntanetị ndị ọzọ ma ọ bụ site na isi mmalite ndị isi, dịka ọmụmaatụ si ahịa ahịa email ma ọ bụ onye dere aha ụlọ ọrụ ha na nyocha ahụ ma banye na njikọ ahụ ozugbo.
Ee e. Strategy Business 2 nke kwesịrị ilebara anya Google
Ya mere, ị nwere ike ịchọta ole mmadụ ga-abanye wee hapụ ebe nrụọrụ weebụ gị. Ugbu a, anyị ga-ahọrọ atụmatụ ahịa ziri ezi maka ụlọ ọrụ gị. Dependencies on what you sell or What services you offer to your customers. Ị nwere ike ịhọrọ ahịa ahịa, mgbasa ozi n'ịntanetị, mgbasa ozi mmadụ ma ọ bụ isiokwu na-akwalite azụmahịa gị na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Usoro ahia kachasị mma e kere eke dị mfe. Nwee ngwaahịa ka mma karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere ahịa kachasị mma n'ụwa ma ngwaahịa gị bụ ezigbo ogbenye Google ga-ama ya. Ihe mere na ndị mmadụ ga-achọ ụlọ ọrụ gị, dịka ọmụmaatụ dabere na nkebi ahịrịokwu. M zụtara ụgbọ ala site na ụlọ ọrụ na otu esi esighachi ụgbọ ala ahụ na ụlọ ọrụ a. Ọ ga-egosi na search engine na ihe na-ezighị ezi na ụlọ ọrụ gị.
Nzuzo nke Elon Muska: iji wuo Tesla, ọ kwụsịrị akụkụ nke Mercedes CLS
Ya mere, tutu ịmalite ịkwalite azụmahịa gị Chee echiche nke ọma maka iwuliwanye ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị. Ụlọ ọrụ m, nke ahụ bụ ụlọ ọrụ Dubai City ọtụtụ afọ gara aga, dabara n'eziokwu ahụ na ọ nweghị ike idozi nsogbu ọ bụla ma tinye ya na ego na ịntanetị. Ya mere dị ka ị na-eche na ọ bụ mmalite, ọ naghị enye m ọtụtụ ihe. Nnukwu ahia ihe niile dị mma, ma ọ dị mwute ikwu na ngwaahịa a juru. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọnụ ọgụgụ ahụ malitere ịchọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ dị elu na Google.
Ọzọkwa, ichikota ngwaahịa Google dị mkpa ka ngwaahịa dị na ahịa. Chee banyere Google ka ihe banyere Exchange. Otu ụlọ ọrụ ga-abanye na Warsaw Stock Exchange nke ka malitere nkwado na imepe ihe a na-akpọ ịmalite. N'ezie, ogwugwu bụ 1-1000000. N’ezie, enwere ụlọ ọrụ ndị ma ama ama ama nke ukwuu n’ihi na anyị nwere ngwaahịa pụrụ iche dịka über na igbe igbe. N'ezie, ụlọ ọrụ a chọtara ndị na-etinye ya ngwa ngwa na Google nyere otu n'ime peeji mbụ na igwe nchọta ahụ ngwa ngwa.
Nr.3 Marketing Content na Google
Ahịa ahịa ahịa na Google na-ede akwụkwọ ziri ezi na ozi maka onye ahịa ma ọ bụ onye ọ bụla na-eleta weebụsaịtị anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ahịa ọdịnaya bụ ederede ederede n'okpuru sistemụ ọchụchọ ịntanetị nke ga-emesị tinye ederede a na ibe mbụ. N'ezie, nke a bụ echiche na-ezighị ezi n'ihi na o nweghị ihe jikọrọ ya na ya. Ya mere, ahịa di n'ime ya na-ekeputa ihe di mma na ọdịnaya di na isiokwu e nyere.
Dịka ọmụmaatụ, nke a na-akọwa ozi ma nyochaa nke ọma otu isiokwu a na-etinyebeghị na ntanetị Internet ọ bụla ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ya mere ọdịnaya ahịa ga-abụ ihe ederede pụrụ iche nke ị na-ede na ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị agbakwunyerela n'ịntanetị ma ọ dịbeghị mgbanwe ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, a na-eji ahịa ọdịnaya eme ihe na corporations na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi.
Ka ọ dị ugbu a, ịzụ ahịa ọdịnaya na-achịkwa ọgụgụ isi. Kedu nlele ego ọ bụla edere ma dị ọnụ ala karịa iji gụọ ma ghọta ya na ọkwa nke ọrụ na nghọta mmadụ. Ọzọkwa, ọbụlagodi na ị ga-achọ ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị nke na-enweghị ezigbo ọdịnaya. Ọ dịkwa mma na ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume.
N'ịntanetị, nkwupụta dịka ọdịnaya bụ Eze na-ejikarị eme ihe. Ya mere na Polish, ọdịnaya na-achị na Intanet. Ụlọ ọrụ kachasị mma nwere ọkwa kachasị elu nwere ihe kachasị mma maka ndị ha nwetara. Ihe ederede a bu nke edere nke ọma na ndi natara ya nke oma ma obu mgbe nile n'isiokwu nke onye obula nwere ike inweta na ulo oru m na acho.
Ụdị ederede na ahịa ọdịnaya Dị ka Wikipedia
Wikipedia ebe a gosipụtara nke ọma ihe kwesịrị ịbụ ahịa nke ọdịnaya na ịntanetị na ihe ị ga-achọ n'okpuru paịnda anyị mepụtara isiokwu a Lee ihe ị kwesịrị ilekwasị anya tupu ịmalite ide edemede na ozi na Intanet.
Blọọgụ ụlọ ọrụ - kwesịrị ịbụ akụkụ dị ike nke weebụsaịtị ma ọ bụ rụọ ọrụ n'okpuru adreesị onwe ya dịka akwụkwọ akụkọ Poland. Ndị blọọgụ ndị a na-abụkarị ndị a na-emelite ma mgbe ụfọdụ, ederede ederede na-esite na Intanet. Maka na ha bụ ihe ọmụma oge ochie na nnukwu ụlọ ọrụ na-aṅa ntị na ọdịnaya ha na-ebipụta.
Blọọgụ Peronal - Nke a bụ nkọwa nke ihe mere na ndụ gị, dịka ọmụmaatụ, njem si mba ọzọ maọbụ ihe ngosi ma ọ bụ echiche nke gị. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ, na-eme vidiyo nke ha na YouTube na gbakwunye na blog a.
Nkuzi Ntanetị - Ntanetị nwere njikọ chiri anya na ngwaahịa, ọrụ na ọrụ ịntanetị nyere. Ndụmọdụ mgbe nile maka ndị na-azụ ihe na Allegro ma ọ bụ OlX. Ya mere, ihe ndị a bụ nkọwa doro anya nke ị nwere ike inye ndị nnata gị, dịka ọmụmaatụ maka nri ma ọ bụ rụkwaa ụgbọala. Ha na-etinye ihe dị mma nke ọma n'ihi na ha na-eweta ozi na-adọrọ mmasị ma kọwaa nke ọma ihe onye edemede chọrọ ilekwasị anya.
Ihe edere nke ndị ọkachamara - ederede edere site na ndị mmadụ nọ na ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ. Ihe ndị a na-ezo aka na ozi a pụrụ ịdabere na ya na naanị ozi a na-enyocha ma na-ejikarị jikọta ọdịnaya. Dịka ọmụmaatụ, saịtị mgbasa ozi gọọmenti ma ọ bụ ndị nnọchiteanya mba ọzọ. Ndị a bụ ọtụtụ mgbe ị na-akọwa ihe nyere isiokwu. Otú ọ dị, ha na-agbalị ịkọwa isiokwu ahụ n'ụzọ dị omimi na n'ọtụtụ okwu, ndị ọkachamara na-akọwa ya na mpaghara nyere na amaokwu ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Mkparịta ụka Intanet - Ọtụtụ mgbe, ihe ndị a na-akwalite ọdịnaya na ịntanetị. Ọtụtụ n'ime ihe a dị mkpa mgbe ọ na-abịakwute ụlọ ọrụ na-akwalite ngwaahịa ha. Dịka ọmụmaatụ, Kim Kardashian bụ onye nnọchianya ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, redbull na-eji kpakpando egwuregwu iji kwalite ụdị ahụ. Nkwupụta nke ika na mkparịta ụka Ndị ama ama ma mara amara, dịka nyochaa onye isi nke Microsoft ma ọ bụ Apple bipụtara na magazin ụlọ ọrụ.
Pọdkastị Ịntanetị - Pọdkastị adịghị na ọdịnaya nke ahịa ederede. Otú ọ dị, ọtụtụ ụgbọelu ọchụchọ na-eleba anya na pọdkastị nke ndị mmadụ maara nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ, dịka ọmụmaatụ, ndị na-achọpụta ma ọ bụ mmadụ TV. Otú ọ dị, a pụrụ ịdenye podcast na ọtụtụ mgbe ndị na-ezipụ pọdkastị na weebụ tinye nsụgharị n'ọtụtụ asụsụ, ya mere nke a bụ akụkụ nke ahịa ahịa.
Nyocha na ịntanetị - kachasị dị irè na Google. Ọ bụrụ na ndị mmadụ tụkwasịrị obi na-anwale ha. Dịka ọmụmaatụ, site na ndị na-ede blọgụ. Ọtụtụ mgbe, ọ dị mwute ikwu na nke a abụghị eziokwu. N'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji gbakwunye ozi ezighi ezi banyere ụlọ ọrụ ahụ. O bu ihe nwute na oge niile achoro na intaneti. Ịkwesịrị ịnye nlezianya pụrụ iche ma ọ bụrụ na ịbịakwute ikike nke isiokwu nyere ma ọ̄ bụ podcast na ịntanetị. N'ezie, nnukwu ụlọ ọrụ dịka Business insider Polska. Ọ bụ na ụlọ ọrụ Polish agaghị ekpughe ya. Ya mere, ọ dị mma ịlele onye dere ya ma ọ bụ onye bịanyere aka na ya.
Nkọwa ngwaahịa - ederede na ozi gbasara ngwaahịa, dịka ntanetị n'ịntanetị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha na-akwado nhazi na njirimara ndị e depụtara na kaadịadịahịa, nke bụ àgwà maka ngwaahịa dịka WooCommerce Poland.
Nyocha banyere map Google - Ugbu a Google kere Google My Business na Poland. N'ihi ngwá ọrụ a, anyị nwere ike ịlele ụlọ ọrụ na obere ụlọ ahịa na ahịa mpaghara. Anyị na-enwe ike ịgụtụ banyere ha na ihe ezigbo ndị ọrụ internet search engine na-ekwu banyere ụlọ ọrụ nyere. A ngwa ahia ngwa ngwa ahia ahia na Poland.
Ee. 4. Mgbasa ozi na Intanet
Ya mere ọtụtụ ndị na-eche na mgbasa ozi na ịntanetị bụ AdWords. N'ezie, nke a bụ echiche efu n'ihi na mgbasa ozi n'ịntanetị bụ echiche sara mbara nke ịkwalite ngwaahịa.
A pụrụ ikewapụta mgbasa ozi n'ime ihe abụọ. Nke mbụ n'ime ha ga-abụ mgbasa ozi n'efu. Dịka ọmụmaatụ, na nke a, anyị na-eche banyere blog mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ede blọgụ mere fim na YouTube wee dee ihe gbasara ngwaahịa ị nwere.
Mgbe e mesịrị, ọ gbakwụnyere nke a na weebụsaịtị ma tinye njikọ gị na ịnweta mgbasa ozi na-enweghị ego site na igwe. Ọtụtụ mgbe, mgbasa ozi n'efu na-enyekwa ozi sitere na weebụsaịtị onye ọzọ gbasara ụlọ ọrụ gị. Anaghi akwụ ugwo otutu n'ime ugwo n'ihi na ulo oru nke, dika ima atu, na-enye mnya igwe maka ire ere. Ụlọ ọrụ gị na-enyekwa akụkụ maka ụdị ejiji ndị a.
Ga-agbakwunye ozi gbasara ụlọ ọrụ gị ebe ị nwere ike ịnweta akụkụ ndị a maka igwekasị ha bụ mgbasa ozi n'efu site na ebe nrụọrụ weebụ ha na ntụziaka nke ụlọ ọrụ gị.
Akụkụ nke abụọ nke mgbasa ozi nwere ike ịkpọ mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Ndị a bụ mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye akara ka ha wee nwee ike ịkwalite ngwaahịa maka ndị ahịa ha. Dịka ọmụmaatụ, Facebook na-akwalite posts OLX na-enye gị ohere iji nwalee ọkọlọtọ ọrụ gị. Linkedin na-emepụta mgbasa ozi kpọmkwem nke a pụrụ izigara otu ìgwè ndị ahịa ndị nwere mmasị na ngwaahịa a. Dịka ọmụmaatụ, Twitter mere mgbasa ozi maka mpaghara nyere, dịka India ma ọ bụ America. Ahịa mgbasa ozi dị iche iche na mmadụ ole ga-enweta ozi gbasara ụlọ ọrụ gị. Dịka ọmụmaatụ, a na-akpọ mmapụta ma ọ bụ akwụkwọ ntanetịime. Ndị niile na-enweta ozi gbasara ngwaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ma na akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ ọzọ maka ịkwalite ngwaahịa gị na ịkekọrịta ozi gbasara ika gị a na-akpọ mgbasa ozi akwụ ụgwọ na ịntanetị.
Ntre ke akpatre, ọ bara uru itinye ego na mgbasa ozi akwụ ụgwọ? Ọ dabere na ụdị ngwaahịa ị na-ere nakwa ihe ị kwụrụ maka ngwaahịa a. Ihe na-esote bụ n'ezie asọmpi ma ọ bụrụ na ọ na-akwalite otu ngwaahịa ahụ na ahịa a dị ka gị na otu nnukwu na e nwere asọmpi. N'ihi na mgbe ufodu, a na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi ma ghara inye nnukwu nsonaazụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ. Na nke a, anyị ga-akwado ka itinye ego na ahịa ahịa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ Facebook ma ọ bụ email. N'ihi na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nyere gị aka, kwuo, karịa PLN 100,000 na AdWords, nakwa kwa ọnwa na saịtị ha na-ewu ewu ma ngwaahịa gị ga-aga n'okpuru ụkpụrụ ọ bụla. N'ụzọ dị mwute, ọ bụrụgodị na ngwaahịa gị dị elu, ndị ahịa ka ga-ahụ ihe ị na-enye. Na ahịa na-asọ asọmpi, ọ dị mwute ikwu na ọ dị arọ.
Nr.5. E-azụmahịa na Intanet
E-ahia ahịa ngwá ọrụ iji ruo onye ahịa. Otú ọ dị, n'aka onye njikwa ahia, ọ nwere ike iji ya dịka ihe ncheta nke ngwaahịa gị. E-azụmahịa nwere ọtụtụ ngwá ahịa ahịa dị nnọọ ukwuu, dịka ọmụmaatụ, ebubo aborted - nke ahụ bụ, ma ọ bụrụ na onye ahịa abanye na ebe nrụọrụ weebụ gị ma gbakwunye ihe na ụgbọ. Enwere ike iji komputa a dị ka ihe eji ekwu okwu n'efu maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Dị ka ọmụmaatụ, onye ahịa ahụ na-abanye m tinye ma wepụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ na-enweta ozi-azụ na ngwaahịa ahụ ọ kwadoro na ihe niile i nwere ime bụ ime ugwo.
Nke a bụ ezigbo ahịa ahịa nke na-arụ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% na ahịa ọ bụla. E-azụmahịa na ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị nke a pụrụ iji mee ihe na obere ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, agbakwunye na ndepụta ịzụ ahịa ma ọ bụ ịmepụta ndepụta ọhụụ ọhụrụ ị nwere ike iji mee ihe n'ọdịnihu. Ọtụtụ ndị na-eme ya nke ọma n'ihi na, dị ka onye ọ bụla maara, ụbọchị nwere naanị 24 awa. E nwekwara ọrụ dị ukwuu nke mere ọtụtụ ndị chọrọ nchetara maka ngwaahịa gị ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ihe na onye kpọrọ ya ihe atụ mgbe ịzụrụ ngwaahịa gị. Okwesiri iziga site na igwe mgbe ụbọchị ole na ole gbasara ozi a, ị ga-achọ ịzụta ngwaahịa ị chefuru iji gbakwunye ụgwọ Ị na-agba gị ume ka ị zụta n'ọdịnihu.
Ọ bụkwa ụdị ahịa ahịa dị mma, ma ọ bụghị ụdị ahịa ahịa. Ya mere, tupu ị nweta onye ahịa site na Ịntanetị ma chetara ya na anyị dị adị. Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ncheta dị otú ahụ, dịka ọmụmaatụ, pracuj.pl.
Mba..6. E-mail ahịa
Nke a ka bụ usoro kachasị dị irè nke ịntanetị ọ bụla e kere na ịntanetị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọ dịghị ahịa ọzọ dị adị, ndị mmadụ adịghị agụ e-mail sitere na mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ. N'ụzọ dị mwute, anyị anwalela ya ọtụtụ ugboro na anyị niile nwere ike ikwu dị ka ndị ahịa na-arụ ọrụ na ahịa na Poland na ozi ahịa ahịa ka dị otu. Kedu ka o si enwe obi ụtọ? Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị oge iji chọpụta ozi na ịntanetị, na-ele TV ma ọ bụ na-anọdụ ala na ụmụaka. Na mberede, ana m enweta ozi site na ozi-e na-agwa m na ụfọdụ onyinye abịawo.
Kedu esi mepụta akwukwo ozi site na Mailchimp?
Lee online Otu esi emeputa mkpọsa mgbasa ozi site na email. N'ezie, usoro kachasị mma bụ mailchimp nke na-eziga ahịa ahịa dị mma nke ọma na ndị ahịa ndị na-enweta e-mail sitere na usoro a na-abanye na igbe akwụkwọ ozi ọ bụghị na spam, anyị na-akpọ gị òkù ịhụ usoro a ma hazie igbe mbata gị. Ụlọ ọrụ a, n'ezie, na-enye nzipụ n'efu nke puku abụọ ozi ịntanetị kwa ọnwa.
Ọnụ ego Kowalski na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ site na ịpị mgbasa ozi na ekwentị. Ma ọ bụrụ na ọ bụ na mbụ na weebụsaịtị a nke nwetara mgbasa ozi n'ụdị ozi ahịa email. Site na ígwè ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ zitere ya maara na onye ahịa nwere ike ịchọrọ mmasị na ngwaahịa ahụ ụlọ ahịa a nyere. Ya mere, onye ahịa ga-abata na nke mbụ ya, ọ gaghị azụta ya ntakịrị, ma ọ ga-eji akara m. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ ga-enweta ozi e-mail ọzọ, dịka ọmụmaatụ na ego nke 20%. Ya mere, m ga eche banyere ya. Ihe dị mma m hụrụ oge ole na ole ugbu a, m nwetara diskant ọ na-akwụ ịzụta m ga-abanye, ana m azụta otu azụmahịa.
Nke a bụ otú ahịa email si arụ ọrụ. Ọ bụ ngwá ahịa ahịa kachasị mma nke ndị ọkachamara IT mere. Maka na anaghị m etinye aka na ndụ mmadụ na onye na-enweta anyị nke na-azụta ngwaahịa n'aka anyị adịghị mkpa ịbanye na weebụsaịtị ma ọ bụ gụọ ozi. Naanị igwe na-enweta email gbasara onyinye ọhụrụ sitere na ngwaahịa anyị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Igwe ahụ na-agbakwunye na nkata ngwaahịa ahụ anyị zigaara ya na mail. Ka anyị kwuo sekọnd iri na ise ebe ọ bụ na email ga-azụta ngwaahịa na anyị ga-ezite gị ya.
Na nchịkọta, ahịa email dị iche na ahịa ọdịnaya ị nwere ike ịlaghachi azụ ahịa ọtụtụ ugboro. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ngwaahịa anyị chọrọ ire azụ, anyị nwere ngwaahịa ọzọ dị mma anyị nwere na ntinye anyị. Anyị na-alọghachikwa ahịa a ọtụtụ ugboro ihe na-enyere ya aka ịghọta ihe ụlọ ọrụ anyị nyere. Ọfọn, dị ka ị maara. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ hụrụ oge nke abụọ oge nke atọ. Ọ ga-enwe mmasị na ngwaahịa a karịa oge mbụ ọ na-abata mgbe ị gụrụ gbasara ebe nrụọrụ weebụ anyị. Ugboro ugboro i nwere ike ịhụ ya na ebe nrụọrụ Adidas ma ọ bụ Nike.
Nr.6 Obodo Marketing
Ịme ahịa ahịa obodo ị chọrọ ịma ebe ị ga-esi tinye ebe nrụọrụ weebụ gị. N'okpuru ị ga-achọta ebe 30 weebụsaịtị ebe ị nwere ike ịgbakwunye azụmahịa gị n'efu ma bulie ọnọdụ gị n'ahịa dị na Dubai. N'ezie, ụfọdụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ ndị a bụ ndị mba ọzọ ma ị nwere ike iduzi anya Google na ị gbakwunye azụmahịa gị gaa na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ. Ma ị bụ ụlọ ọrụ na-enweta ndị ahịa na UAE na ị ga-achọ ịkwalite ahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ a n'okpuru okwu nke ihe atụ kapeeti nhicha na Gulf region na Dubai.
Ọ bụrụ na ị na-emepụta map Google. Ọ bụ ezi echiche ịkwado ọnọdụ gị na nchọta Google mgbe e mesịrị. O di nwute, dị ka ihe ọ bụla ọzọ na-eme n'ịwapụta ebe nrụọrụ weebụ, ọ na-ewe ọtụtụ oge.
Hụ onwe gị na njikọ ahụ N'okpuru ebe a, ọ bụghị naanị na ị ga-edebe ebe nrụọrụ weebụ gị mana tinyekwara map gị iji kwado onwe gị na mpaghara gị. Dịka ọmụmaatụ, n'okpuru, dịka ị nwere ike ịhụ, anyị nwere njikọ njikọ ebe ọ bụghị nanị na ị nwere ike ịgbakwunye ebe nrụọrụ weebụ gị mana tinyekwara map na ebe nrụọrụ weebụ gị nke ga-emesị gaa elu na ntanetị Ịntanetị.
Ọzọkwa, dịka ị pụrụ ịhụ, ahịa Google nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ. Obodo na-agbakwunye ụlọ ọrụ gị na ebe nrụọrụ weebụ dị ka Wirtualna Polska ma ọ bụ Onet. Jụọ ndị na-ede blọgụ iji tinye njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị na nne gị ga-eme ka ọnọdụ ahụ ma ọ bụ iru ahịa gị. Ihe a nile bụ n'ezie ahịa Google.
Nr.6 Marketing na Google na Ngwaọrụ Mobile
Ekwentị mkpanaaka na ekwentị ekwentị bụ n'ezie ihe siri ike. N'ihi na iji kwalite azụmahịa gị na mmadụ na gị ekwentị mkpanaka, ị ga-elekwasị anya n'ọtụtụ ihe.
Anyị ga-echeta na anyị agaghị enwe ike ịgbasa mgbasa ozi maka mgbasa ozi n'ihi na igwe ndị ọrụ anyị dị mma, ọ dị mwute ikwu na ha enweghị nnukwu nza. Ya mere, anyị nwere ike tinye mgbasa ozi ma ọ bụ abụọ nke ga-ebuli na akụkụ A ndị a bụ ndị a na-akpọ mmapụta. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ anyị na-eji ngwá ọrụ Patel dị iche. Nke a bụ n'ezie ngwá ọrụ dị oke egwu na-echetara ndị ahịa banyere azụmahịa gị.
Ndị debanyere aha bụ ngwá ọrụ dị ukwuu ichetara ndị ahịa gị banyere azụmahịa gị. Ịnwere ike iziga ha ozi a na-akpọ ndị a na-akpọ telifon ozugbo na ekwentị ha n'oge ọ bụla. N'ezie, n'ime sekọnd ole na ole, enwere m ike iru ọtụtụ ndị ahịa ndị garalarị na weebụ gị mana ị nwere ike chetara n'oge ọ bụla.
Ihe niile ị ga - eme bụ ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-eziga m site na igwe na-ezigara ha ozi na ekwentị ha n'oge ọ bụla n'ụbọchị. Anyị na-atụ aro ka ị wụnye ngwa a na ebe nrụọrụ weebụ gị n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ịbawanye okporo ụzọ a na weebụsaịtị. Ndị ahịa gị agaghị alaghachi na weebụsaịtị naanị ma nweta ozi gbasara ngwaahịa ọhụrụ ịchọrọ ma chọọ ịkọrọ ihe ọhụrụ banyere ụlọ ọrụ anyị oge ọ bụla ị nwere ike ịkpọtụrụ na-agafe site n'ichebara ọwa ahịa ọ bụla ọzọ.
Nr7 SEM - Ịhọrọ isiokwu
OZI O dere akwukwo mara nma banyere okwu a. Nke a na-akọwa ihe niile banyere ya na otú o si dị iche na SEO na otu esi eji ngwá ọrụ a.
N'aka nke anyị, anyị ga-achọ ịgbakwunye naanị nkọwa ole na ole banyere otu anyị si achọta ihe ndị a na-akpọ mkpirisi. Mgbe a bịara n'ọnọdụ dị na Google. Anyị aghaghi icheta mgbe nile na ihe kacha mkpa bụ asọmpi anyị na-alụ ọgụ. Ọ bụrụ na anyị bụ ahịa ọhụrụ, anyị adịghị adị na ịntanetị, anyị ga-ejiri eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na ahịa ruo ọtụtụ afọ, ọ dị mwute na anyị karịrị anyị.
Ya mere, otu esi elele anya ma ọ bụrụ na anyị nwere ohere ịnweta na ịntanetị ma ọlị. Ngwa kachasị mma maka ịlele mkpirisi igodo ndị anyị ga - achọ ịchọta na ntanetị weebụ bụ Ubersuggest nke Neil Patel kere. N'eziokwu, ọ bụ onye mbụ nlekota ịntanetị. O kere usoro nhazi ebe nrụọrụ weebụ na America maka ụlọ ọrụ kachasị elu. O jikọtara ya na ụlọ ọrụ ndị dị ka Yahoo na Google. Nweekwa nke ọma ịchọta isiokwu ọchụchọ na ịntanetị.
Ubersuggest site Neil Patel
Biko cheta ịhọrọ Polish mgbe ị na-achọ nkebi ahịrịokwu. Ụzọ kachasị mfe bụ ide okwu okwu okwu nke ị chere na ndị ahịa na-achọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ịntanetị. Mgbe nhọrọ ahụ gasịrị, lee otú asọmpi siri ike maka okwu a ga-esi nọrọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ezie, yana n'usoro ihe omume a, ị nwere ike ịhụ ndị asọmpi gị na ụlọ ọrụ ndị ị ga-alụ maka ọkwa dị elu na Google.
KWFinder - Usoro nyocha ọkachamara maka mkpụrụokwu okwu
Ngwaọrụ ọzọ ị nwere ike iji bụ KWFinder. Ọ bụkwa ngwá ọrụ nke na-enyere aka marketer ahụ ile asọmpi ahụ ma chọọ ntụgharị okwu dị nnọọ mkpa. Onwe anyị, anyị nwalere usoro abụọ ahụ. Ha abụọ na-arụ ọrụ nke ọma ma a bịa n'ihe odide ndị bụ isi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-achọ mkpụrụokwu dị oke mkpa, nke a na-akpọ Long Keywords. KWFinder yiri ka ọ bụ ngwá ọrụ kachasị mma iji chọpụta ahịrịokwu ziri ezi ị ga-achọ ịmalite na njem gị na njem SEO.
Ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịzụ ahịa na Google, ịkwesịrị ijikwa ngwaọrụ abụọ ahụ dị elu,
Nr.8 SEO - Nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ
Ugbu a bụ oge nke onye ọ bụla gụrụ isiokwu a ga-achọ ịgwa m isi anwansi a nke ga-enyere ya aka ịpụ na ibe mbụ nke Google. Nke ahụ bụ igodo ị chọrọ ịma, ọ bụghị ederede ogologo oge. Hụ ọbụna na anyị isiokwu nke ugbu a dere isiokwu a ị fọrọ nke nta ka akwụkwọ mpịakọta na pịgharịa. Nke ahụ bụ n'ihi na ngwa ngwa Google ga-abata n'isiokwu anyị wee hụ na ọ nwere ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ọnịrịokwu ndị bụ isi nke anyị ga-achọ itinye onwe anyị. Dịka ọmụmaatụ, maka isiokwu a, anyị ji ahịa ireahịa na Google. Nke a abụghị n'ezie okwu nke nyere anyị ọtụtụ ndị ahịa na ihe nchọgharị weebụ. Ma ihe ka ọtụtụ n'ime ha kwesịrị icheta na ndị na-agụ ya bụ ndị ahịa anyị ma dee maka ha.
Ụlọ ọrụ anyị anaghị ede akwụkwọ n'okpuru Google. Anyị na-agbalịrị idepụta isiokwu dị mma na ịgụ ntụziaka. Dịka ọmụmaatụ, n'oge ule anyị mere na Dubai. Akwụsịla ọtụtụ n'ime isiokwu anyị banyere 1,000 ugboro na Facebook. N'ezie, isiokwu ndị a nwere ihe niile gbasara 3000. Ha bụ ndị mbụ 10 Google maka ezigbo oke okwuntughe ebe nyocha na-ele 3,000 echiche kwa izu.
"Ihe ndị bụ isi nke ịntanetị bụ:"
B) Ihe odide nke Iwu Kwesịrị Ekwesị Na-esote
Ọ bara uru ịlele ihe ị na-eme na ịntanetị site na ihe nchọgharị weebụ. Ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ịchọọ ịkwụ ụgwọ maka mgbasa ozi ma achọghị ịnweta ego na ya iji budata ndị ahịa ọhụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ị ghaghị inwe ihe pụrụ iche na saịtị ahụ. Ya mere ederede ogologo, n'eziokwu, na-agwụ ike kwesịrị ime ihe atọ ahụ. Imirikiti ndị ahịa na-ede ihe ọmụma na Ịntanetị enyela mkpirikpi karịa akwụkwọ 2000. Iji dee ihe ederede 4,000 nke ọma, ọ dị mwute na ọ bụ ọrụ 10 nke ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Google ahịa abụghị ihe ọchị, ọ dị mwute. Nke a bụ ọrụ siri ike na a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ gị.
Nr.9. Social media facebook na LinkedIn
Ya mere, mgbasa ozi mgbasa ozi bụ isiokwu ahịa anyị kacha amasị anyị. N'ụzọ dị mwute, mgbasa ozi mgbasa ozi adịghị emetụta engines ọchụchọ ma. Naanị mmetụta nke ndị a na-akpọ mgbasa ozi ọha na eze nwere n'ezie na weebụsaịtị bụ nkwalite weebụsaịtị na ndị ọrụ ndị ọzọ.
N'oge ugbu a, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na netwọk dị ka Instagram gbanyụọ nnyefe data iji chọpụta engines. Anyị amaghị ihe kpatara ya. Nanị ụlọ ọrụ ahụ ka na-eziga ozi banyere ihe a na-akpọ ego nke òkè gị na Facebook bụ Facebook.
Otú ọ dị, enwere otu ihe na-emetụta ọnọdụ dị na engines ọchụchọ. Nke a bụ ihe a na-akpọ njikọ aka, ya bụ, nkwekọrịta Polish bụ mmadụ ole ga-abanye ma meghachi omume na ebe nrụọrụ weebụ gị wee gaa n'ihu kwadoro ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ya mere, olee ihe na-enye gị mgbasa ozi mgbasa ozi na Marketing na Google? N'ezie, ha na-ewetara gị ọtụtụ ndị ahịa na ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ. N'ezie, nke a na-agụnye ịmalite ịzụ ahịa ahịa ahịa, dịka ọmụmaatụ, maka mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na mkpọsa mgbasa ozi kwadebere nke ọma na onye nwere echiche nke otu esi eme ya, ị nwere ike ịme ihe ịga nke ọma. Ọtụtụ ndị egosila na na Instagram n'onwe ha amụtala inweta ọtụtụ nde ụmụazụ. Na Facebook, o nwetara ego dị nde dollar n'otu ọnwa. O yighị ka ọ bụ ezie na. Ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ dị mma ma ị mara otú e si eme mgbasa ozi, ị nwere ike ime ezigbo ndekọ ego.
Ụlọ ọrụ anyị bụ onye ọsụ ụzọ ma ọ bụ ihe kachasị ukwuu na Facebook na njikọta mgbe a bịara n'ịkwalite Dubai. Ị nwere ike ịlele ya site na ịpị foto dị n'okpuru.
Nr.10 Ahịa na Google na Youtube?
Ị maara nke kachasị search engine bụ? n'ezie nka bu Google. Na ntanetị Internet ọzọ na-esote ozugbo ọ bụ YouTube. Ya mere, ugbu a, 1000 na-agbakwụnye ụlọ ọrụ nwere foto na ihe nkiri. Ihe kpatara ya, n'ihi na ndị mmadụ enweghị oge iji nọdụ ma gụọ otu edemede nke kwuru ihe odide 10,000. Tupu ha eruo isi nke ikpe ahụ, ha ga-eji ihe karịrị 20 nkeji gụọ isiokwu ahụ. Ndị mmadụ na-abụkarị umengwụ ọzọ.
Ya mere, olee otu ị ga esi esi nweta peeji Google mbụ. Dekọọ ọtụtụ narị fim na otu ọnwa. N'ezie, ọ ga-esiri gị ike ịdekọ ihe nkiri ma mee ka ezigbo ụlọ na ihe ndị ọzọ. Ugbu a, ị nwere ike ịzụta pụrụ iche ndabere na Allegro na n'ezie na-eri banyere PLN 200. Na enweghi uzo di iche na ogo di ka ihe omuma ihe di na redio.
I kwesịkwara iche banyere ịkwalite ngwaahịa gị na ụlọ ọrụ gị na YouTube. Ụlọ ọrụ anyị enweela ọganihu ụlọ ọrụ si Dubai. Anyị nwetara ihe ịga nke ọma, ọtụtụ narị puku ndị mmadụ lere ụlọ ọrụ anyị anya ma chọọ ya na polajował n'ihu. Chetakwa, ihe ọ bụla a na-eme bụ onye ahịa nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Iji jiri ahịa Google zuru oke, ị ga-amụta otú e si eji vidiyo vidiyo. Tinyere ihe ndị ọzọ, mepụta mgbasa ozi vidio Nwere oke ego zuru oke ma gosipụta ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka obodo gị. Dabere na ọrụ ị na-ere, ọ nwere ike ịbụ mpaghara Poland. N'ezie, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịzụta ọrụ ha na YouTube. Ma vidiyo nkwado ahụ na-akwụ ụgwọ n'okpuru PLN 50 nke ị nwere ike ime na Fiverr.com, dịka ọmụmaatụ.
Nr.11. Nyochaa weebụsaịtị
Ọ dị mma, ịmeela ahịa ị jikọtara Google Analytics, ị nwere ihe niile. Banyere mgbasa ozi ma wepụtara mgbasa ozi ahịa mbu. Ugbu a bụ oge iji bulie weebụsaịtị na koodu html. N'ezie, ime nke a ị chọrọ onye mmemme. Anyị anaghị adụ gị ọdụ ka ị lie na koodu weebụ ị na-amaghị banyere asụsụ mmemme. N'ihi na ọ bụrụ na ị nọ ebe a ọ dịkarịa ala otu ugboro ị mehiere, a ga-ehichapụ akwụkwọ niile na ihe niile ị meworo na ntinye akwụkwọ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu ọzọ ga-ehichapụ.
Anyị maara site na anyị onwe anyị na ọbụna obere mgbanwe nwere ike na-ewute gị na ụlọ ọrụ gị. Maka na ọ bụrụ na ị maghị ihe ị na-eme, ị nwere ike ime nhụzigharị dị njọ nke ga-eri gị. Ya onwe ya, ọtụtụ ugboro na mmalite, ụlọ ọrụ anyị etinyewo ọnụ ụzọ ahụ site na mmalite. Ebe ọ bụ na anyị amaghị ibe anyị, anyị mere nzuzu nzuzu na anyị nwere ike ịmepụta ihe niile site na mmalite ma ọ na-efu anyị nnukwu ego na ogo.
Chetakwa, ọ dịghị ihe dị njọ maka onye ahịa nwere ike. Dị ka ezighi ezi na weebụsaịtị. Ndị ahịa ha fọrọ nke nta ka 95% hapụ ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụrụ na ha hụ njehie ọ bụla n'ihi na ha na-eche na ha enweghị nchebe na ha ekwenyeghị na ụlọ ọrụ gị nwere ntụkwasị obi. Cheta na ahịa na Google na-adabere n'echiche gị.
Nchịkọta nke akụkụ a
N'ikpeazụ, n'isiokwu a, ị mụtara ihe ole na ole dị mkpa nke na-enyere gị aka ịghọta ihe dị na weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe ọmụma gị n'ụzọ zuru ezu ma ghọta otú Internet si arụ ọrụ. Ị ga-aga Google ntanetị n'ịntanetị n'okpuru. Lelee ma mezue ule ụfọdụ ga - enyere gị aka n'ọrụ gị n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike itinye ihe onwe onye n'isiokwu a site na ụlọ ọrụ anyị. Ọ dị mkpa ka ị gwa gị na ọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ na-edebe ihe na-abụghị ebe dị mfe. N'ezie, ebe a na-abịa ike gwụrụ ma na-arụ ọrụ karịa ike gị. Ebe ị na-edebe ihe ịntanetị ma ọ bụ na-echekwa na ị ga-achọ ime onwe gị na-abụkarị onye na-enweghị ekele.
Ma ọ dịghị mgbe ị ga-akwụsị ịlụ ọgụ mgbe niile, ọ dịghị ụzọ ọ bụla ị gaghị enwe ike ịga nke ọma. Anyị na ụlọ ọrụ anyị na-alụ ọgụ na Dubai ruo ọtụtụ afọ, ọ bụ nanị mgbe afọ nke atọ gasịrị ka anyị jisiri ike nweta ụfọdụ ọnọdụ ndị a pụrụ ịdabere na ya nke mere ka anyị nweta Google. Ya mere, ọ dịkarịa ala bụ ịchọta ihe dịka afọ atọ. Cheta na n'ogologo, ụlọ ọrụ na-etinye onwe ha site na 5 ruo 7 afọ ma nke a bụ nkezi nke ị kwesịrị ilekwasị anya. Ọfọn, ọ dị mwute na nhazi bụ usoro na-adịte aka nke na-ewe oge dị ukwuu. Ọ na-etinyekwa ego karịa.
PS isiokwu a nwere mkpụrụ edemede 5,000. Ya mere dị ka ị na-enyo enyo ugbu a, ị chọtara anyị na ntanetị ịntanetị. Ị gụọ akwụkwọ anyị dum, ihe anyị dere na-amasị anyị? Anyị ka gosila gị na ogologo na àgwà nke isiokwu ahụ dị mkpa na engines ọchụchọ. Okwu ogologo na nke ederede ederede, ngwa ngwa ngwa gị na Google. Ekele ma lelee anya n'okwu gị ma ọ bụ oku ekwentị gị. Anyị ga-enyere gị aka n'ịzụ ahịa na nhazi nke ebe nrụọrụ weebụ gị na Poland ma ọ bụ ná mba ọzọ.
Ọtụtụ ihe mere ị kwesịrị iji jikwaa ebe nrụọrụ weebụ SEO gị
Taa, ihe fọrọ nke nta ka 95% nke ụlọ ọrụ nwere ebe nrụọrụ weebụ ha. Ma n'ezie ọ bụ naanị ebe ndị a na-akwalite ma kwadoro na Google na-emeri ndị ahịa. N'ezie, ịmepụta weebụsaịtị agaghị eweta gị ndị ahịa ọ bụla, ma ọ bụ nsonaazụ ndị a tụrụ anya ya. N'oge a ọbụna ebe nrụọrụ weebụ mere nke ọma anaghị eme ego ọ bụla.
Ya mere, ịmepụta weebụsaịtị abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ịkwado azụmahịa gị n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ahịa azụmahịa dị irè na nke bara ezigbo uru, ị ghaghị inweta onye ahịa ahụ naanị site na mkpụrụ okwu ndị dị ndụ. Anyị maara site na ahụmahụ na ihe karịrị 85% nke mgbasa ozi na-akpọ Google AdWords abụghị ihe dị irè ma ọ bụrụ na ị nwere obere azụmahịa. Mgbasa ozi ndị a na-akwụ na Google na-eji naanị ụlọ ọrụ buru ibu na ndị na-etinye na ntinye aka na engines ọchụchọ.
Poland bụ ezigbo ihe atụ nke mmepụta azụmahịa na ịntanetị. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa ọhụrụ site n'aka Google amụbawo site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 55% n'ime afọ ise gara aga. N'ezie, ebe ọ bụ na 2015, ọganihu nke mmepe Intanet na ụlọ ahịa na ntanetị na-eto ngwa ngwa. Ugbu a, ndị ahịa na ịntanetị na-achọ ihe niile ha chọrọ banyere ngwaahịa ahụ. Ulo na-azụkwu ahia n'ahịa, dịka ọmụmaatụ, na Allegro ma ọ bụ na OLX.
Nbudata Google di iche iche na abia na mgbe mgbe. Ndị na-ede blọọgụ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-agbakwụnye ozi na nkọwa gbasara njem ma ọ bụ uwe. Uzo ahia di na intaneti ma na abawanye site na kwa afo karia n'obodo ukwu dika Warsaw ma obu Krakow na ndi Legion.
Gini bu SEO na ahia?
Nkọwapụta weebụsaịtị na-emewanyewanye visibiliti nke ebe nrụọrụ weebụ gị na engines ọchụchọ. Site na Bekee ọ bụ njikarịcha search engine ma ọ bụ SEO. N'oge a, ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ngalaba SEO na ahịa ya. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewuli ha akara na Intanet na-eme ka ọhụụ nke ebe nrụọrụ weebụ ha dị elu, na-emepụta akara ha, na-eme ka ikike nke ngalaba ahụ dị, ma, n'ezie, gbalịa ime ka ọnọdụ obodo dị na Warsaw dị irè dị ka o kwere mee.
Ozugbo ịmalite ịdebe weebụsaịtị gị, bulie visibiliti nke ụlọ ọrụ gị n'ọhụụ ma dọtakwuo ndị ahịa na-eji ọrụ gị ma ọ bụ zụta ngwaahịa gị na ụlọ ahịa n'ịntanetị gị. Notkwesighi ịbụ onye ọkà ihe ọmụma iji hụ na ọtụtụ ndị ahịa na-azụta ihe n'ịntanetị na ozi nyocha banyere ụlọ ọrụ.
N'ezie, ọtụtụ ndị na-eji ịntanetị enweghi ike ịchọgharị ebe nrụọrụ weebụ niile ma na-echekwa ebe ha na-enye ngwaahịa yiri nke ahụ maka azụmahịa gị.
N'ime 85% nke ndị mmadụ na-abanye ọnọdụ 5 kacha elu na Google. E nwere ọbụna ụdị egwu egwuregwu nke ahịa na ọ bụrụ na ịchọrọ izobe ozu ahụ, mee ya n'akụkụ ọzọ nke Google.
Ihe ole na ole mere i ji kwesị ịnọ n'ọnọdụ elu na Google gị na ebe nrụọrụ weebụ gị?
Mee ka uru
Ndị na-adịghị agha ahịa
Mee ka azụmahịa gị dịkwuo ukwuu
Onye ahịa na-alọghachi na ntanetị ịntanetị
Enwe ike iji chetara ndị ahịa site na ahịa ahịa
Belata nkwụsị maka ọrụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ
N'oge ugbu a, ọ na-eme ka ị na-ekiri na ụlọ ahịa ma na-azụta na ịntanetị. Karịsịa onye ntorobịa, ọbụna nwanne m nwoke nke m tọrọ, gara ụlọ ngwa ngwa RTV ụlọ ngwa ngwa. O lere anya na ngwaahịa ndị ahụ na-enyocha ntụle a na ntanetị ma we laghachi n'ụlọ zụtara ngwaahịa a na ịntanetị. A maara ihe n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-egosipụta ngwaahịa na ụlọ ahịa dị ntakịrị ọnụ n'ihi na ha ga-etinye akụkụ ha. Na ịntanetị N'ezie, ha nwere ike ime obere ego n'ebe ahụ.
Olee otu esi amalite ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ nke ọma?
Ya mere ịmalite ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị nke ọma, ị ghaghị ịmalite site n'ịcha. Hụ otú saịtị ahụ dịruru na ihe ọsọ dị na ibe a ma ma ọ nweghị onye gbajiri ọnọdụ ma mee njikọ ndị a na-akpọ spam.
Ịkwesịrị ịlele akara na nyocha ahụ ma adreesị ahụ ziri ezi nakwa ma ụlọ ọrụ ị chọrọ ịtọ na ụlọ ọrụ gị nwere nyocha dị mma. E nwere ọtụtụ ihe na-emetụta ma saịtị gị dị elu ma ọ bụ dị ala.
N'ezie, oge ugbu a na-achọ ihe ngwọta ndị na-abụghị usoro. Ugbu a, SEO nile na-adabere na agbanwe agbanwe Google algorithms. N'ezie, usoro nke ụlọ ọrụ a na-eji 100% nzuzo. Ya mere, ndị ọkachamara atọ ahụ na-edebe ebe nrụọrụ weebụ enweghị echiche banyere ọrụ ha na-eme n'ezie?
Ọ bụghị ọkachamara ọkachamara na-arụ ọrụ na ndị ahịa nwere ọnọdụ nke ọma nke a na-aghọta nke ọma na weebụsaịtị google, dịka ọmụmaatụ kaadị azụmahịa Google ma ọ bụ map Google.
Onye ọ bụla ọkachamara na-ekewa ọnọdụ nke ebe nrụọrụ weebụ n'ime ihe abụọ dị mkpa.
Ebe ntanetị saịtị na-eme ka saịtị ahụ dị mma. Ịkwalite koodu ihuenyo na ịlele ọsọ ọsọ.
Na nhazi mpempe akwụkwọ mpụga, ya bụ, na-agbakwunye njikọ nke ụlọ ma na-akwalite ngwaahịa na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Ntak-ahọrọ anyị ụlọ ọrụ?
Ụlọ ọrụ ahịa anyị si Dubai na London. Anyị enwewo ihe ịga nke ọma gbalịa na ebe nrụọrụ weebụ dị na mba ọzọ. Ugbu a, ụlọ ọrụ anyị na-enyere ndị ọchụnta ego aka site na Poland ịkwado ebe nrụọrụ weebụ, dịka ọmụmaatụ na Warsaw, Krakow na obodo nta dịka Radzimin.
SEO - Call ME taa ma mee ndokwa n'efu Marketing ikwu okwu!
Ebe ntanetị na-agbanye na Abu Dhabi
-Anwusi ozi banyere otu esi akwalite azụmahịa gị n'ịntanetị!
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ ga-enyere gị aka ịkwado ụlọ ọrụ gị na Emirates. Anyị ji obi ụtọ na-akpọ gị òkù ịkwado nzukọ anyị. Anyị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na ịtọ weebụsaịtị na Google.
N'oge ndị a, idozi weebụsaịtị bụ, ọ dị nwute, ọ bụ ọrụ siri ike kama ọ chọrọ nkwado ọnụ na ndị maara otu narị otu ihe dị mkpa iji gboo iji hụ na saịtị ahụ nwere ogo dị elu na igwe ọchụchọ.
Banyere azụmahịa Intanet Abu Dhabi?
Abu Dhabi bụ obodo a kapịrị ọnụ ma a bịa n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Abu Dhabi bụ ihe niile dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ UAE. Na nso isi obodo Dubai Voivodeship Central Center nke azụmaahịa Gulf agglomeration na Emirates.
Ndi 109 nke onu ogugu obodo na UAE na nke abuo na UAE, ndi bi na 340,000 ndi bi na 2018 ka edebara aha ha n’ọfis. Ọzọkwa, na-elele ọnụ ọgụgụ ndebanye aha onwe ya, ọ bara uru itinye ego na azụmaahịa na ịntanetị na Abu Dhabi.
Ọtụtụ ndị n'oge a na-achọ ọtụtụ weebụsaịtị na ngwaahịa na ịntanetị. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-anọ n'ọnọdụ nke mbụ na ebe nrụọrụ weebụ, ị kwesịrị ịmara onwe gị na ịnye saịtị anyị.
Abu Dhabi bụ otu n'ime obodo kachasị amasị anyị na ebe anyị nwere ndị ahịa ole na ole bụ ndị na-edobe weebụsaịtị na UAE.
Abu Dhabi bụ onye ama ama maka ịbụ obodo ụmụ akwụkwọ, ya mere, ekwesiri icheta ebe nrụọrụ weebụ SEO na Abu Dhabi. Azụmaahịa na-amalite n'oge agụmakwụkwọ ma ọ bụ ebe a bụ oge kacha ekpo ọkụ ebe ihe fọrọ nke nta ka obodo jupụta na ụmụ akwụkwọ na ndụ n'ụlọ nri.
Ọnwa ndị ọzọ n'ime Abu Dhabi bụ ọnwa okpomọkụ ma na ị nwere ike ikwu nkwuwa okwu ma ọ bụ na ị ga-arụ ọrụ nke ọma na oge a na-azụ ahịa. Na nke a na ịzụ ahịa na Abu Dhabi bụ na ọ bụ nnọọ ọnụ ọgụgụ nke ego.
Abu Dhabi bu obodo di omimi na obere ego. Kama nke ahụ, nnukwu ego a na-etinye n'ebe a adịghị abanye n'ime egwuregwu ọbụna mgbe ọ na-abịa ahịa azụmahịa. Iche na ahịa na Google nwere ike ime mgbe nile.
Mgbe ọ na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ na ahịa ahịa. O di nwute na usoro ochicho ndi nkiti na onye nwe ulo a na-aru ebe a. N'okpuru ị ga-ahụ ụlọ ọrụ ole na ole ndị anyị na-arụ ọrụ na Emirates na anyị na-edebe weebụsaịtị ha.
Dị ka onye mbụ n'ime Abu Dhabi igosi gị na anyị na-arụ ọrụ ugbu a n'ahịa ahịa anyị, anyị ga-eji osisi sandba beba na ụlọ nri ndị dị na mpaghara maka ụlọ akwụkwọ.
Anyị anọwo na-eme weebụsaịtị webụsaịtị SEO na azụmaahịa ugbu a ọtụtụ afọ na ndị ahịa anyị nwere afọ ojuju.
SEO na Abu Dhabi - Kpọọ taa ma dozie ọnụego efu!
mmemme mmemme nke ebe nrụọrụ weebụ
John West ga-ahazi ya nke ọma
SEO nke obere obodo na UAE na Peeji nke mpaghara. Anyị na-anabata ndị ibe anyị site na obere weebụsaịtị. Companylọ ọrụ anyị debe peeji nke Emirates. Anyị enyerela ọtụtụ narị obere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara Western Gulf aka.
Obere akụkụ nke obodo Emirates bụ nnọọ ama obodo, ị maara ihe a n'ezie ezigbo obodo di na Emirates na Gulf Region.
Ịga njem na district Dubai, ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ dị jụụ nwere ike ịmalite ịkwado ọnụ. Ndị ahịa ebe ị nwere ike inye ọrụ ma ọ bụ ọrụ gị.
Obodo pere mpe na Dubai na Abu Dhabi bụ naanị 25 kilomita dị n'etiti etiti Dubai. Nakwa n'ezie klọọkụ bara ụba nke ị nwere ike ree ngwaahịa gị.
N'oge ahụ, onye ọ bụla nwere ịntanetị na Dubai. Eleghị anya ị na-eche ọtụtụ ugboro otu esi eme iji ruo obodo niile n'otu ụbọchị. Azịza ya bụ mfe ịre ahịa ịntanetị. Companylọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka ịkwalite ma kwalite azụmahịa gị na obere obodo na Emirates.
Anyị na-edobe ebe nrụọrụ weebụ gị na gburugburu obodo Dubai!
Anyị akwalitewo ma debe ọtụtụ narị ụlọ ọrụ na London, London, Brussel. Na Emirates, e nwere ihe karịrị ndị 15,000 bi, obodo ahụ nwere ihe karịrị square kilomita 24,000. Ọzọkwa, ikike iji ree ngwaahịa gị ma dokwasị azụmaahịa gị n'ịntanetị dị ezigbo mma.
Ọ bara uru ịhazi ebe nrụọrụ weebụ na Emirates?
Ya mere, afọ ole na ole na ebe a ị nwere ike ịnweta ịntanetị dị n'etiti 20 na 65 afọ. N'ihi ya, ọtụtụ ndị ka na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ ego. Nke a dị ezigbo mkpa ma a bịa n'ịkwalite ngwaahịa gị na ịntanetị. N'ihi na ọ kachasị mma ịre ngwaahịa na Intanet maka ndị nwere ego ma nwee ike iji ha na oge ọ bụla.
Ndị mmadụ nọ n'oge a na Emirates na-ejikwa usoro mgbasa ozi dịka Facebook. Anyị nwere ike inyere gị aka inweta ndị ahịa 10,000 n'otu ụbọchị.
Yabụ ọ bụrụ na ị ga - achọ ịkwalite azụmahịa gị UAE ma ọ bụ ọbụna na Gulf. Companylọ ọrụ anyị na-enye ọkwa ọkachamara nke weebụsaịtị na Dubai na gburugburu ya. Ibute Dubai na Abu Dhabi ga - ekwe omume nye anyi na Google !.
Ụlọ ọrụ anyị arụkọtara ọnụ ma nọgide na-akwado ndị ọrụ ụwa na ndị ọkachamara na ụlọ ahịa na ahịa. Na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Middle East. Tinyere ihe ndị ọzọ, anyị nyere aka na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ụlọ ọrụ dị mkpa iji nweta ndị ahịa ngwa ngwa. N'ezie, nhazi nke ebe nrụọrụ weebụ na-achọ ntakịrị karịa ọnwa 6 ruo ihe dịka otu afọ.
Ulo ahia nke ndi ahia ahia nke obodo, ndi ahia gi bu ndi n’acho oru achoro ihe na ntaneti. Anyị ga-enye gị ihe niile na mkpọsa ahịa nke anyị ga-akwadebe maka gị. Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ anyị ga-abịa n'ọfịs gị ma ọ bụ n'ụlọ gị iji kwuo maka ihe ị ga-amalite ịkwalite ntanetị. Companylọ ọrụ anyị na-enyere aka n'eziokwu. Anyị chọrọ inyere ndị ahịa anyị aka. Ndị otu HR anyị anaghị achọ ndị mmadụ aghụghọ.
Anyị chọrọ inyere ndị ahịa anyị aka na Emirates
Citylọ ọrụ Dubai City chọrọ inyere gị aka ịme ọnụnọ gị na ahịa mpaghara. Na mgbakwunye, anyị nwere ngwaọrụ iji mee ya, anyị maara otu esi enyere gị aka iritekwu ego ma wuo azụmahịa na mpaghara mpaghara dị nso na Dubai. N’ezie, ọ bụrụ n’ịchọrọ, anyị ga-ewebata gị n’atụmatụ imekọ ihe na idobe weebụsaịtị dị n’ahịa UAE. Site na Dubai, ọ bụ naanị 25 km gaa n'etiti City. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere ezigbo ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ ọ ga-ewe nkeji 20 iji ruo n’etiti obodo. Ya mere, anyị nwere ike inyere gị aka ịmalite azụmahịa na mpaghara na kwaga na mpaghara Oke Osimiri niile na ahia ma obu oru gi di ebube.
Anyị nwere olileanya na ị ga-enye anyị ohere ma kwe ka anyị tinye ebe nrụọrụ weebụ gị na UAE. Ọ bụrụ na ịchọrọ Ịnwere ike ịgụ obere ntakịrị ihe ọmụma banyere njikwa na ahịa Ịntanetị, dịka ọmụmaatụ na Instagram.
Mgbe ị gụchara ụfọdụ n'ime isiokwu anyị, ị ga-amata na anyị nwere echiche banyere ihe anyị na-eme na ahịa ahịa na ahịa ahia. N'ezie, nhazi ebe nrụọrụ weebụ bụ ọrụ anyị kachasị. Ma anyị ga-eme ike anyị niile iji mee ka akara ọrụ gị na akara azụmahịa nke Google ma bulie ebe nrụọrụ weebụ gị ka ndị ahịa mpaghara wee chọọ ụlọ ọrụ gị wee chọta gị na mbụ.
Ịkọwa maka SEO na Dubai
Ya mere, Ịkwado na UAE - Ọ ga-ekwe omume ma nwee ohere dị mma na ị ga-anọ na Top 10 Google ma ọ bụrụ na ị nye anyị oge ka afọ a gasịrị. Mmeri ahụ na Dubai na Abu Dhabi na-eto eto oge niile. O di nwute, ahia ahia na ahia ma o buru na afo a, onye mmadu na-ama oso onu kacha elu 3 n'oru nyocha na ndi ahia ga-amalite itinye nzaghachi di mma.
Ọ bụ nnọọ ihe siri ike iji nweta ebe a ọzọ ụlọ ọrụ ọhụrụ. Ọzọkwa, ị ghaghị iche echiche banyere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ nke na-akwalite ngwaahịa ndị dị n'ịntanetị.
Yabụ na anyị nwere olile anya na ị ga-akpọtụrụ anyị, anyị na-atụ anya oku gị. Hụ gị n'obodo Radzymin mara mma, Achọrọ m ka ị nwee chi ọma na ọganiihu n’iwu ụlọ azụmahịa na nso Dubai.
Kedu ka esi esi soro ndi mmadu na instagram?
Kedu ka esi esi soro ndi mmadu na instagram? - Nwere ma ọ bụ enweghị ebe a bụ ajụjụ! Na oge anyị, ịkparịta ụka n'Ịntanet bụ otu n'ime ụdị ndị na-ewu ewu n'etiti ndị na-eto eto. Instagram bụ otu n'ime ndị na-arụ ọrụ nke ikpo okwu mgbe ọ na-abịa ịkwasa mgbasa ozi na Ịntanetị.
Instagram abụghị ụdị ihe ntanetị ga-enyere gị aka ịmepụta weebụsaịtị ma ọ bụ SEO. Ma n'ezie na-emeri ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ga-eme ka ị mara ma melite ihe a na-akpọ Internet Brand awareness.
Otu esi achọta umuazo na instagram - Marketing Automation si Dubai City Company
Instagram bụ nke ọgbọ Y, ma ọ bụ ndị a mụrụ na 80 nke nke iri abụọ na narị afọ. Ugbu a, anyị bụ ọgbọ nke Narị Afọ Iri, nke a na-akpọ ọgbọ dijitalụ. N'ihi ya, ịbịakwute ụdị ndị a chọrọ ezigbo ọwa ahịa nke oge a.
N'ihi nkwalite ngwaahịa na ọrụ gị na channelị Instagrama, anyị nwere ike iru ọtụtụ ndị ahịa na ndị ọrụ nkwekọrịta. Uzo ahia ahia a, n'agbanyeghi anya, abughi nani umuaka ndi na akwado ha. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ọ bara uru ịbanye na ịhụ iji tụnyere ya.
Ihe ndi mmadu na ndi oru ndi ozo!
Ya mere, ebe ị ga-amalite inweta Instagram gị inweta ndị ahịa ọhụrụ. Ụzọ kachasị mfe bụ ịmalite site na ịmepụta akaụntụ na ebe a na-elekọta mmadụ.
Otu esi enweta ụmụazụ na instagram - Malite na Instagram - Dubai City Company
Nnyocha dị otú a tupu anyị amalite ịmụ otú e si enweta ụmụazụ na Instagram. Nzuzo a ka Facebook nweworo ọtụtụ afọ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-enye mgbasa ozi na Facebook site na igwe, ị nwere ike ịlele na ha na-apụta na Instagram. Anyị maara site na ahụmahụ na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ọtụtụ mmadụ na-esite na Instagrama n'oge mkpọsa mgbasa ozi. Nke a dị mma na mgbakwunye na mgbasa ozi na Facebook. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike iru ọtụtụ ndị ahịa.
Kedu ihe bụ Instagram?
Ya mere, ọ bụ ebe a na-ahụkarị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe ọtụtụ nde ndị ọrụ si America na Eshia na-ebipụta foto ha na vidiyo banyere isiokwu dị iche iche.
E kenyere Instagram na 2010 wee malite ọrụ ya dị ka ngwa apụl. Instagram ngwa ngwa na-eto eto na ịntanetị. Site na obere ngwa ngwa na 2 afọ ma mee ka ọrụ netwọk dị ka ụlọ ọrụ dijitalụ.
Maka obere afọ 3, a na-anwale ngwa a n'ọtụtụ mba karịsịa na Central America n'oge mmalite. Facebook weghaara Instagram maka nnukwu ego nke ihe ruru ijeri dollar.
Isi ihe kpatara nke a ji bụrụ ihe a na-ewu ewu bụ nnọọ ihe dị mma. N'ezie, ụlọ ọrụ a abụghị nke mbụ e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche ndị nọbu n'oge ahụ na-enye ọrụ yiri nke ahụ. Otú ọ dị, Instagram emewo ka mgbakwunye na foto ya na ike ịkwagharịa ihuenyo ahụ n'ụzọ dị oke ọsọ karịa asọmpi ahụ. O kpebiri n'ezie ihe mere usoro a ji ghọọ otu n'ime ngwa mgbasa ozi Facebook kachasị ukwuu.
Instagram na-ejikwa ngwa ngwa gbakwunyere ohere nke ịgbakwunye foto site na ekwentị ahụ ngwa. Mgbe ihe dị ka ọnwa isii site na mmalite nke ngwa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị nde mmadụ ndebanye aha. Instagram mere ngwa ngwa ma gbakwunye ya ngwa. Ikike inwe ngwa ngwa foto.
Ọ bara uru ịmalite ahịa site na Instagram na Dubai?
Instagram bụ ezigbo ahịa ahịa. Ọ na-elekwasị anya na otu mmekọrịta nke gbasara ejiji, njem na ọrụ dị iche iche maka ụmụ nwanyị. N'ihe gbasara ụmụ nwoke, e nwere n'ezie okwu ikpe nke ụlọ ọrụ ndị na-akwalite ọrụ ha na ndị ọrụ na otu nwoke. Ma nke a bụ ihe kachasị mma.
Otu esi enweta ndi mmadu na instagram - 100% Marketing Automation! - Dubai City Company
Instagram na-agwa anyị n'ụzọ doro anya na pasent nke ndị ọrụ 'itinye aka na ikpo okwu a dị nnọọ ukwuu karịa nke ndị ọzọ na netwọk mmekọrịta, dịka twitter. Karịsịa n'ihi na ndị inyom nọ ọdụ na Instagram na-achọgharị ọtụtụ uwe tupu ha emee mkpebi.
Kedu ihe mere o ji dị mma ịmalite site na ụlọ ọrụ Instagram? N'iburu na itinye aka na ndị ọrụ Instagrama dị elu karịa na Facebook ma ọ bụ Twitter. Na eziokwu na Instagram na 2018 nwere ihe karịrị 3 ijeri ndị na-arụsi ọrụ ike na-agwa anyị na onye ọ bụla nke atọ nọ n'ụwa na-eji saịtị a mgbe nile.
Ya mere olee otu esi amalite iji nweta ndị na-eso ụzọ?
1. Dejupụta profaịlụ ụlọ ọrụ gị na Instagram
Na mbido Ị ga-atụle kpọmkwem nzube nke ịmepe akaụntụ Instagram. Maka na n'elu ikpo okwu a ị nwere ike ịhọrọ n'etiti akaụntụ nzuzo ma ọ bụ akaụntụ ụlọ ọrụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịhọrọ akaụntụ ụlọ ọrụ, ọ dị mwute ikwu na ị ga-ejikọ ha na akaụntụ Facebook gị. Nke a nwere uru ya dịka ọ ga-enye gị ohere ịjupụta data gị onwe gị nke ọma ma nye gị ohere ịhọrọ ụlọ ọrụ ị ga-akpọsa.
Ntuziaka Instagram nke ụlọ ọrụ na-enye ohere ịnweta ọnụ ọgụgụ na-enye gị ohere ịmepụta mgbasa ozi nkwado. Ya mere ná mmalite, ị ga-ahọrọ foto pụrụ iche ma ọ bụ profaịlụ ka ndị ọrụ ndị ọzọ wee pịa profaịlụ gị. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga-ejikọ foto ahụ na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ azụmahịa gị.
Ihe ọzọ na-agbakwunye ihe amamihe dị na azụmahịa gị pụrụ iche ma ọ bụ nkọwa ụlọ ọrụ gị. Gbalịa ka ị ghara idetuo ederede site na weebụsaịtị ndị ọzọ ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ. N'ihi na ugbu a internet engines engines nwere ihe a na-akpọ spam nzacha. Ndị nzacha a na-enyocha ederede edepụtara site na saịtị ndị ọzọ ma jiri aka gị belata ọkwa nke ibe gị na Instagram.
Ọ dị ezigbo mkpa ka edere gị na ebe nrụọrụ weebụ na nnukwu akwụkwọ ozi. Aha ụlọ ọrụ gị wee lee anya nke ọma. Ọfọn, ọ gwụla ma ịchọrọ ịkwalite ika gị mgbe ahụ i nwere ike ịkwalite ya n'ụzọ dị otú ahụ na ndị chọrọ gị na Instagram kọwaa aha ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akara gị. Cheta na ihe kachasị mkpa n'ịkwalite na netwọk mmekọrịta bụ maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ aha gị ka ọ bụrụ nke na-adịghị echefu echefu.
Ihe ọzọ dị ezigbo mkpa. Instagram kwukwara na o nwere ike ịgbakwunye ihe a na-akpọ hashtags. Nke ahụ bụ, okwu ndị a na-akpọ picket Keywords nke nwere ike ịchọta ndị ọrụ Instagram site n'ịgbakwụnye ozi gbasara isiokwu a na profaịlụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ anyị na - eji: #DubaiCityCompany
Otu esi enweta ndi mmadu na instagram - Marketing Automation! - Dubai City Company
2. Malite na-akwado profaịlụ gị
Ná mmalite, anyị na-atụ aro na ị ga-ahụ na ndị mmadụ abụrụla Instagram na-amụta na ị mepeela akaụntụ n'ebe ahụ na ihe a na-akpọ ya. Ụzọ ọzọ ị ga-esi gwa onye ọ bụla ị rụkọtara na mbụ ị meghere akaụntụ ọhụrụ Instagram gị.
Ọ bụ nanị ịmepụta mkpirikpi post na Facebook, twitter, linkedin, goldLine. N'ezie, atụla anya na oke ihe dị ịtụnanya ma na mberede puku mmadụ abụọ ga-eso profaịlụ gị.
Ugbu a, ihe karịrị 40% nke ị nwere na Facebook nwere ike inwe akaụntụ Instagram. Dị ka ị maara na Facebook Instagram jikọtara ọnụ, ya mere ha ji n'aka na ị gbanwere data. Ya mere, onye na-agbaso ihe omuma gị na Facebook ga-amara ọkwa site na igwe ahụ na ị nwekwara akaụntụ Instagram. Ya mere, ị ga-eche echiche banyere ihe ole na ole na azụmahịa Facebook gị.
3. Kwusaa ahia ihe na Instagram
Ya mere foto ga-enyere m aka na ajụjụ a Olee otu m ga esi esi nweta ụmụazụ na Instagram?
N'ihe banyere foto na mbipụta nke mgbasa ozi, a na-emejuputa usoro dị mma na mmejuputa ya na-agbanwe agbanwe na njikọ Instagram. Na ntinye zuru oke nke oge gị ga-akwụ ụgwọ na ihe ịga nke ọma nke profaịlụ ọhụrụ gị na nata nke ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ.
Ihe kachasị mkpa ị ga-elekwasị anya n'ebe a bụ àgwà foto gị na àgwà nke ihe nkiri gị ị ga-ebipụta. Dịka ọmụmaatụ, vidiyo ndị dị na HD nwere karịa 50% karịa mgbe instagram na Facebook. Ọzọkwa, ogo nke ihe nkwado gị ga-abụ ọkwa kachasị elu n'ihi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye ihe niile naanị na HD.
Ihe kacha mkpa na ahịa ahịa na Instagram bụ:
Na-akpatakarị ụlọ ọrụ, ọ bụghị foto. Ndị ọrụ Instagram nwere ike ịzaghachi na fim karịa foto. N'oge a, ngwa ngwa Algorithms Instagram na Facebook agbanwewo usoro ha ka e wee nwee ike ịmepụta fim mgbe mgbe. Nke a bụ n'ihi ihe nchekwa nchekwa dị ọcha. Ihe ngosi a na-ewere 200-300 MB na ndị na-ekiri ọwa ndị ọzọ na-aga ugboro ole na ole. ya mere mgbe oge ụfọdụ gasịrị, a ga-ewepụ fim ahụ na listi. O bu ihe nwute, i ghaghi ikwu n'ezoghi ya, ha adighi adi nma na Instagram dika ulo oru.
Họrọ naanị foto dị elu! Ọ bụrụ na ị gaa n'elu 10 nkiri na Instagram. Ị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya na ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a na-ezipụ na foto kachasị mma bụ ndị akara, n'ụzọ zuru ezu, n'ihe ha na-akọwa. Ọ bụrụ na ịmalite na-ezipụ foto ndị dị ezigbo mma ma ọ bụ ọkara dị mma. N'ezie ndị mmadụ ga-amalite ịhapụ profaịlụ gị.
Edezi Foto Ihe egwuregwu ọzọ ga-abụ nhazi nke foto site na nzacha. Imirikiti nchịkọta Instagram a ma ama na-enwe ike melite agba ma tinye mmetụta dị mma. Karịsịa na ekwentị, ọtụtụ ndị ọrụ na-eji nyocha Mayfair. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị dị mma na-edezi foto, ọ bụ mmetụta dị egwu na-ekpo ọkụ. Enwere m ike inyere gị aka inwekwu ndị na-eso ụzọ.
Jiri ihe nhichaa maka foto nke ọ bụla. Ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ị nwere ike ịgbakwunye bụ 30 ihe ndozi. Iji chọta onye ziri ezi na-arụ ọrụ na ịchọrọ ndị ọrụ Instagram ndị ọzọ iji chọọ gị, anyị na-atụ aro ka ị hụ webstagram. Nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ dị nnọọ mfe ebe ị nwere ike ịhọrọ mkpirisi kachasị ewu ewu. Na dabere na nke a, họrọ nke kachasị ewu ewu na nke ọ bụla maka ọkwa ọ bụla na ị ga-agbakwunye na Instagram iji gbakwunye hashtags kachasị amasị gị.
Otu esi enweta ndi mmadu na instagram - Webstagram Ịmepụta Marketing Hasztags!
Kwusaa ngwa 24 foto kwa ụbọchị. N'oge a, ị na-eche otú ọ ga-esi kwe omume ibipụta foto na vidiyo na Instagram ihe 24 awa n'ụbọchị. Ya mere azịza ya dị nnọọ mfe, ị ga-amalite iji mmemme ahịa na-enyere gị aka ịmepụta ahịa.
4. Jiri mmemme na-emepụta ahịa
Ihe kachasị emepụta ngwa ngwa ngwa ngwa. Ụlọ ọrụ anyị ejiriwo ngwa a jiri ọnụ ọgụgụ nke ụmụazụ na Instagram. N'ezie, na mbido, anyị ji mbadamba ụrọ. Ma mgbe ọtụtụ izu ma ọ bụ karịa, anyị chọpụtara na n'eziokwu ị ga-agbakwunye posts ga-abụ ihe ọ bụla awa abụọ iji nwee nkezi ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ anyị.
Kedu ka esi enweta ụmụazụ na instagram - Tailwind Marketing Automation!
Ihe omume a na-enye gị ohere ịmepụta ọtụtụ ọnụọgụ. Nke na-enweghị òkè gị ga-ezigara Instagrama ka ị na-ehi ụra, dịka ọmụmaatụ. Ya mere, ụlọ ọrụ anyị malitere ịcha site n'iji usoro a na usoro mmemme ahụ. Anyị emeela ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ na Instagram gaa na 5,000. Ugbu a, anyị nwere ụlọ ọrụ Instagram kasị ukwuu na ụlọ ọrụ anyị, n'ihi ya, anyị anaghị etinye aka na nkwalite ahia a.
Olee otú iji nweta ụmụazụ na instagram - Azụ ahịa arụmọrụ!
5. Kwuo ma gwa ya
Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ nwere akaụntụ nwere ike ịchọta channelụ mmekọrịta. N'oge a, ọrụ gị ga-enyere ha aka ịkwalite azụmahịa ha. Ụzọ kachasị mfe ime nke a bụ ịgbakwunye nkọwa ma ọ bụ ozi nkenke gbasara ngwaahịa ya. Daalụ maka izipu foto ma ọ bụ na-agbakwụnye ozi ịchọrọ ya.
Ọtụtụ ndị m na-ajụ onwe m otu ajụjụ Olee otú iji na-eso ụzọ Instagram? Ya mere, nyere ndị ọzọ aka ka ha nyere gị aka. Site na-agbakwụnye nkwupụta ịgwa ndị ọrụ ndị ọzọ na ịchọrọ ya, ị nwekwara ike itinye ozi na-agbaso profaịlụ m ma ọ bụ Hey Leekwa foto m. N'ime 80% nke ndị ọrụ ga-agbaso profaịlụ gị, n'ezie, dị ka ị ga-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ ha na ụlọ ọrụ ha. Anyị maara site na ahụmahụ na ọ na-arụ ọrụ n'ezie n'ihi na e kere anyị eke mmadụ.
Ka anyi mee ihe n'eziokwu na mgbasaozi ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu nwee mmekorita. N'ozuzu, nke a bụ echiche nke atụmatụ a dị ka a na-eche banyere 15 afọ gara aga. Na ụmụ mmadụ na-ekwurịta okwu na ndị mmadụ ngwa ngwa.
O jikọtara ya na ịntanetị ọ bụghị nanị na ọ dị ndụ. Ụzọ kachasị mfe bụ ịchọta ndị mmadụ nọ n'ógbè gị. Dịka ọmụmaatụ, Ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwalite azụmahịa gị na Warsaw.
6. Tụlee ahịa ahịa
Nyocha ahịa data iji setịpụ profaịlụ gị bụkwa ihe dị mkpa.
Nwere ma ọ bụ enweghị ebe a bụ ajụjụ ahụ? Nbudata data ma ọ bụ na ibudata data?
Otu esi enweta ndi mmadu na instagram site na nyocha data ahia.
Ụzọ kachasị mfe iji lelee data ma weghachite data a bụ n'ezie iji usoro Tailwind. Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịlele Google Analytics. Ọ bara uru ịbanye site n'oge ruo n'oge na ịhụ ọtụtụ mmadụ na-abanye na Instagrama, karịsịa mgbe ị setịpụrụ maka mgbasa ozi ahịa na Facebook.
7. Ndị ọrụ ama ama ama
Ịgbakwunye na mkpado, ọbụna ntụgharị, na-eme ka ikike ịkwalite ndị ọrụ mpaghara. Dịka ọmụmaatụ, Ọ bụrụ na ị bi nso na Warsaw ma chọọ ịmalite ịzụ ahịa gị n'obodo Legionowo. Anyị na-atụ aro ịchọta obodo Dubai ma ọ bụ onyeisi obodo nke Dubai na Instagram. Ọrụ omenala na egwuregwu dị ezigbo mkpa.
Nhọrọ maka ndị a na-ewu ewu ọrụ na Instagram. O nwere ike ime ka eziokwu ahụ bụ na ndị a etinyela na foto dị na foto gị ma ọ bụ chọrọ foto gị nye ndị mmadụ bi na ebe a nyere ya. N'ezie, ọ ga - enyere gị aka iwelie ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ nke ndị na - ahụ akwụkwọ gị na Instagram ma na - enyekwara gị aka ịchọta ndị metụtara isiokwu ị na - achọ.
Ya mere, olee otu ị ga - esi nweta ụmụazụ na instagram na obere oge na ụlọ gị? Lee, n'ezie, maka ndị VIP, ndị mmadụ jikọtara na telivishọn ma ọ bụ mgbasa ozi. Kpido ma gbakwunye ozi ma ọ bụrụ na otu n'ime ha azaa ma m chọrọ foto gị site na igwe, ị ga-enweta mmadụ ole na ole na profaịlụ gị.
8 Jiri geotargeting na Instagram
Jiri geotargeting - nke a bụ usoro dị mma maka ịchọta ọrụ gị. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ nke ịchọrọ ịrụ ọrụ maọbụ na-achọ ndị ahịa ndị ọzọ. Anyị na-atụ aro ka gị, dịka ọmụmaatụ, tinye ebe gị na mgbasa ozi ahịa nke Instagram. Ọ bụrụ na ị na-agba ahịa na Krakow, ọ naghị eme ka ịchọta ndị ahịa si, sịnụ, Gdansk. Ya mere ndị hụrụ n'anya si n'èzí a họpụtara ahọpụta adịghị gị mkpa ma ọ bụrụ na i nwere azụmahịa nke na-arụ ọrụ naanị na ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga dum UAE, nanị tinye obodo maka ihe atụ #Dubai na #Abu Dhabi ma ọ bụ #Sharja. Geolocation dị ezigbo mma n'ihi na igwe ahụ na-egosi onye nọ n'ógbè ahụ na ụlọ ọrụ gị na-akwalite ngwaahịa maka mpaghara a. O kwesịkwara ịlele ma gbakwunye ebe ị nwere ike ịhọrọ ya, tinye foto ma ọ bụ vidiyo.
9. Soro ma soro ndi ahia ndi ozo
Veryzọ kachasị mma iji mee ka ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ dịkwuo elu bụ ịgbaso omume ndị a zụlitere n'oge gara aga. Dịka ọmụmaatụ, onye guzobere ụlọ ọrụ anyị bụ John West onye nọworo na-edobe weebụsaịtị na Dubai ruo ọtụtụ afọ. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji nanị ịgbaso profaịlụ ya na njikọ njikọta ma ọ bụ na Facebook. Hụ ihe ọbịa a na-agbakwunye na otu o si agbakwunye.
Teknụzụ, n'eziokwu, ọ bụ iwu 100% ma ọ chọghị itinye ego n'aka gị. Onye ọzọ anyị ga - akwado gị bụ n'ezie John West. Nke a bụ n'ezie ndị isi na-ebute uto Hacker site na America. Ihe ịga nke ọma ọ bụrụ na ị na-ege ntị ntakịrị ma gụọ banyere ahịa ị ga-amakwa otu esi enyocha data niile na otu esi ewulite akara dị egwu na ntanetị.
Kwere anyị, ọtụtụ n'ime ndị a na-ewu ewu na weebụ. Na-agbalịrị ịmụta otú e si enweta ụmụazụ na instagram site n'ịlele ndị ọzọ. Banye na profaịlụ ha na-enyocha usoro ahịa ha kwa ụbọchị ma na-emejuputa otu usoro na weebụsaịtị ha na profaịlụ ha.
10. Systematics iji melite profaịlụ na Instagram
Ihe kacha mkpa bụ ihe. Nhazi bụ isi ihe ịga nke ọma. Mmebe nke usoro ohuru na mgbakwunye nke ọwa ahịa ọhụụ dị oke mkpa. Ịkwado na Facebook na-agbakwụnye posts na njikọta bụ ihe niile ịchọrọ iji jikọta ya. Oge eruro iji tinye ozi kwa ụbọchị iji mee ka engines ịchọpụta ihe ịchọrọ ka ha kwuo.
Ọ na-ewe oge buru ibu iji kwalite ngwaahịa gị na mgbasa ozi mmadụ. Ya mere, na mgbakwunye na akụrụngwa site n'oge ruo n'oge ọ bara uru ịbanye na-agụ banyere ngwaahịa ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Azụ ahịa na-agbanwe kwa ụbọchị, nke dị irè 6 ọnwa gara aga, ọ pụkwara ịbụrịrị ihe na-adịghị mma.
Gbalịa ịjụ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ kachasị mkpa ka ị nweta ụmụazụ na instagram. Kedu ka ị ga esi enweta ego a?
Iji nyochaa Olee otu esi enweta ụmụazụ na instagram?
O di nwute, iji nweta otutu mmadu ndi na agbaso ihe omuma gi. Ị ghaghị ịnweta foto dị mma ma rụọ ọrụ vidiyo na YouTube. Ụzọ dị mma bụ ịkwalite profaịlụ gị na vidiyo ndị ọzọ, dịka metacafe na pintere.
Iji usoro anyị na ndụmọdụ anyị dị omimi ga-eme ka ị nweta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụmụazụ bụghị naanị na Instagram kamakwa na Facebook. N'ụzọ dị mwute, a pụghị ịrụ ọrụ a na arụ ọrụ dị ala. Ị ga-echegharịrịrị usoro ahịa gị. Maka oge etinye aka n'inwe nnukwu ìgwè nke ndị na-eso ụzọ na ndị ọrụ na Instagram ga-ewere ọtụtụ ihe gbasara ndụ gị.
Na-achikota otu esi enweta ụmụazụ na Instagram gbalịa mee ka profaịlụ gị zuru oke jupụtara ebe nkiri na ike ma cheta ịtinye Instagram gị email ahịa na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ ọwa, dịka Facebook na pinterest. Gbalịa itinye aka na ikwu okwu na foto nke ndị ọrụ ndị ọzọ.
Gbalịa ka ị ghara imeri onwe gị site n'iso ndị ọzọ. N'ihi na Instagram nwere spammer igbochi nzacha. Ya mere ịgbaso ọtụtụ mmadụ nwere ike ime ka ị ghara igbochi akaụntụ gị ma ọ bụ ihe siri ike ịlaghachi azụ.
Anyị nwere ike inyere gị aka na Europe?
Warsaw saịtị Naanị si Dubai City Company!
Ihe dị egwu SEO nke weebụsaịtị Warsaw naanị site na Dubai City Company!
Ebe nrụọrụ weebụ Warsaw bụ ihe ị na-achọ? -Anwe 50% nke ndị na-azụ ahịa na Warsaw. Na-arụ ọrụ na ebe ahịa na ahịa n'ịntanetị.
N'ezie, ọ na-atụle ego ole ọ na-efu iji kwụwa weebụsaịtị na Google. Onye ọ bụla maara na Warsaw bụ azụmahịa dị ọcha.
Azịza ya adịghị mfe. Otú a ka ọ na-adakwasị obodo dị ka Warsaw.
N'eziokwu, ọnụ ahịa na-adabere n'ebe a n'ọtụtụ ihe, ọ nweghị ndepụta ọnụahịa maka SEO ma ọ bụ ọnọdụ mpaghara.
Ọbụna tupu anyị echee echiche banyere ịhazi ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. A ghaghị iburu ọtụtụ ihe n'uche.
Ịga nke ndị agha Warsaw na ụlọ ọrụ Dubai City Company
Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ anyị chọrọ ịtọ ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe ahụ, asọmpi egwuregwu ahụ na Google.
I kwesịkwara ịlele nsonaazụ dị na onye nlele okwu. N'ezie, ọ bụ naanị ndị anyị chọrọ ịme asọmpi ahụ.
Ọ dịkwa mma ịlele ụdị ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ dị ugbu a na afọ ole ọ dị n'ahịa.
Mgbe ahụ, a na-ahazi ya n 'usoro nchịkọta njikwa ntuziaka nke Google na ọtụtụ ọdịnaya e bipụtara.
Mbụ Lelee: Site Checker Pro
Tinye ma lelee SEO: https://sitechecker.pro/en/
Mgbe ahụ: Neil Patel Uber na-atụ aro
Ọ bara uru ịbanye ma chọpụta Neil Patel Ubersuggest:
Họrọ onwe gị asụsụ Polish ma hụ etu o siri ike idobe eg ụgbọala na Warsaw ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ: idobe weebụsaịtị Legionowo
Kedu ụgwọ nke nhazi weebụsaịtị na Warsaw?
Ọ bara uru ịmara na, dịka ọmụmaatụ, ụdị okwu ndị a: Ọnọdụ nke Warsaw Pages bụ ndị ọkachamara SEO juru anya.
Ya mere, ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ dịka ụgbọala, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, hotels ma ọ bụ SEO. Mgbe ahụ, ọ bụghị nanị na ọnụahịa nke nkwụsị na Google ga-adị elu, mana oge nkwụsị ga-agbatị.
N'otu aka ahụ, mgbe anyị chọrọ ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na nnukwu obodo, dị ka Kraków ma ọ bụ Łódź.
Ụgwọ nke ezigbo ọkachamara na nchịkwa weebụ ga-abawanye. Ya mere, ọ ga - ewe ndị ọkachamara anyị oge iji bulie ọnọdụ nke saịtị gị na Bing ma ọ bụ Google.
Kedu ihe ị ga-echeta n'oge nhazi?
Otú ọ dị, a ghaghị icheta na nhazi nke ebe nrụọrụ weebụ bụ usoro nke na-eweta abamuru ogologo oge ma nwee ọrụ ga-eme ka ika ahụ bụrụ nke a ga-ejikọta na njirimara ndị ọrụ na ịnọ n'ọnọdụ dị mma na Google ọbụna mgbe ịkwụsị ọrụ .
Ego ole ka ọ na-eri iji na-etinye nnọkọ na Warsaw?
Ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ịkwado ụlọ ọrụ anyị bụ PLN 350. Nke a abụghị ọnụ ahịa buru ibu ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ebe a: ụdị nke Warsaw Centralan ma ọ bụ Old Town.
Kpọtụrụ anyị ngwa ngwa?
05-119 ndi mmadu, ul. Piaskowa 35 / 25
Usoro iwu nke ụlọ ọrụ anyị bụ ịmewanye visibiliti nke ebe nrụọrụ weebụ gị na engine engine Google. Onwe gị, gwa otu n'ime ndị ahịa kacha mma na Poland.
SEO ma ọ bụ nyocha njikwa search na Warsaw bụ usoro nke chọrọ ịme ihe kwesịrị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ dị. Warsaw bụ ọrụ anyị na-eduzi.
Anyị na-emezi nlezigharị na ebe nrụọrụ weebụ. Ihe omume na-agbanwe koodu HTML. Dịka akụkụ nke usoro nhazi weebụ, anyị na-agbalikwa ime ka ndị na-ahụ maka mmekọrịta dị mma dị ka Instagram.
N'ime 90% nke ndị ahịa anyị ga-enweta ezigbo ahịa nke ndị ahịa site n'itinye weebụsaịtị na Warsaw.
N'ihi na nkwụsị ọnọdụ ahụ na nsonaazụ ọchụchọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị ahịa ọhụrụ si na Google pụta mgbe niile. Nke a, n'aka nke ya, sụgharịrị nke ọma na ụlọ ọrụ gị na Google, Bing, Yahoo na ọbụna Facebook. Ya mere iru ndi mmadu nke nwere ike inweta ndi mmadu. O nwere otu uru.
Otu ụlọ ọrụ SEO dị mma ma dị irè ga-ebute ihe ịma aka nke ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ dị na Warsaw.
Ihe ndị ga-emetụta ọnụahịa nke ebe nrụọrụ weebụ na gburugburu Warsaw na n'akụkụ ndị ọzọ nke Poland.
Kedu ihe a ga-atụle n'ihe gbasara nhazi nke ebe nrụọrụ weebụ gị na Mazovia?
dịka anyị kwurula na mbụ, ihe nke ọtụtụ ihe, dị ka:
Ngalaba akụkọ ihe mere eme
Mkparịta ụka na Google
Ana m enye gị nkwado na ụlọ ọrụ ahịa kachasị mma na Dubai.
M na-enyefe ihe niile m na-eme n'ụzọ zuru oke na otú anyị ga-esi tinye ebe nrụọrụ weebụ gị na Warsaw.
Akụkụ mbụ nke usoro usoro anyị ga-abụ SEO nyocha.
Ọnọdụ / SEO bụ usoro nyocha. Nke mbụ, a ghaghị ileba ụlọ ahịa ma ọ bụ weebụsaịtị anya na ọsọ ọsọ na Google.
Lelee ngwa ngwa nke Google
Ị nwere ike ime ya n'onwe gị ebe a:
Ihe kachasị mkpa bụ ịhụ ihe ikike gị na ebe nrụọrụ weebụ nwere.
O kwesịkwara ịlele nọmba nke njikọ na-abata na ngalaba.
Lelee ya ebe a: https://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/
Mgbe ị na-elele DA - ngalaba Authority na PA - Njikwa peeji nke. Nke a abụghị ihe dị na Google ma ọ dị mkpa ịhụ.
Ọ bara uru ịlele ọnụọgụ ọchụchọ ọchụchọ na Google. Na ole ihe nwere ike imetụta ọnọdụ nke ibe.
Ná nkezi, ọnụahịa nke ụlọ ọrụ weebụ na Warsaw na - agụnye ịmepụta ọdịnaya na blog na ịmepụta saịtị ahụ dịka isiokwu nke onye ahịa ga - ahọrọ. Nke ahụ bụ, na nkenke, ị.
Kedu ihe anyị na-elebara anya na ịhazi ụlọ ọrụ gị?
Ụlọ ọrụ anyị ugbu a na-etinyekwu ihe na ntinyekwuo mmasị na ọdịnaya na ọdịnaya bara uru nke e bipụtara na forums ndị ọzọ.
Ọ bụ ya mere ọ dị ezigbo mkpa na ebe nrụọrụ weebụ anyị na-edebe na Warsaw na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ha, n'ezie, na search engine Google kachasị mma na echiche nke m chere na ọ bụ ọdịnaya Google bara uru kachasị mma.
Anyị ga-echeta na mgbe ụfọdụ, ebe nrụọrụ weebụ na-echegbu onwe ha na "njehie nke ndị na-ahụ maka oge gara aga" - dịka ọmụmaatụ, e wuru ha na ngalaba ndị na-enweghị ogo, n'ihi ya, ha mere ka ha nwee njikọ dị mma.
N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, anyị aghaghị ịlụ ọgụ siri ike mgbe ụfọdụ ọbụna izu iji mụbaa SEO.
Ndị isi anyị ga-enyekwa aka n'ọnọdụ ikpe na-enweghị olileanya. Ebee ka onodu na Google siri ike. N'ezie, anyị ga-enye gị ohere kachasị mma maka azụmahịa gị.
Nke ga-eme ka anyị nwee ike ịpụta na nsonaazụ ọchụchọ gị na ụlọ ọrụ gị na Poland.
Uru anyị? Anyị na-arụ ọrụ na Warsaw
Anyị na-eme naanị ahịa zuru ezu na ịkwado ọrụ!
Enwere m isi, ọ dịghị ụzọ dị mkpirikpi na isiokwu nke ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ Warsaw.
Otu, anyị nwere ihe karịrị 150 afọ nke ahụmahụ na nhazi weebụsaịtị na Warsaw.
Anyị na-arụ ebe kwesịrị ekwesị nke weebụsaịtị na Warsaw. Ya mere, ebe nrụọrụ weebụ nke ndị ahịa anyị na-anọ n'ọkwá kasị elu na Bing na Google.
Anyị na-akpọ gị òkù ịmara ihe anyị nyere (kpọmkwem ebe anyị na-etinye ya n'okpuru) na ozi iji malite imekọ ihe ọnụ na Warsaw.
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-enye ohere maka ụlọ ọrụ nwere nnukwu ihe dị mkpa na Warsaw. Ndị nlekọta anyị na-ejere ndị ahịa kachasị baa uru n'isi obodo.
Ị nwere ike ịchọta anyị na OLX na Warsaw!
Hụ nkọwa zuru ezu banyere ebe nrụọrụ weebụ na Warsaw.
Ọnọdụ nke Warsaw Wilanów
Ya mere, na ebe nrụọrụ weebụ Warsaw ga-abụ isiokwu dị mkpa maka anyị. Ya mere, a zụrụ ndị ọkachamara anyị maka usoro a ruo ọtụtụ afọ.
Anyị na-agakwuru ụlọ ọrụ ọbụla na nghọta na nghọta nke ọ bụla n'otu n'otu. Na isiokwu nke nhazi weebụsaịtị maka onye nkesa - Warsaw. Anyị enweghị nha.
Maka na anyị maara ohere ahịa ma wulite atụmatụ nke ọ bụla maka azụmahịa ọ bụla. Ekele na nke ahụ naanị anyị ga-abata otu ndị natara.
Anyị na-eji ngwaọrụ ịzụ ahịa ịntanetị dị irè nke ga-enye gị ohere imeri ọkwa ndị ọzọ na Google.
Ihe ọmụma, nkà na ahụmahụ Dubai na ịhazi ibe na Bekee na Arabic, na-akwado mmeri nke ebe nrụọrụ weebụ asọmpi na Intanet.
Ahịa ahia na mgbasa ozi n'ịntanetị ga - eme ka ụlọ ọrụ Dubai City Company mụbaa ahịa nke ngwaahịa gị.
Ụlọ ọrụ anyị bụ otu nke ga-eme ka ị nwekwuo obi ike n'ahịa ahụ ma mee ka ọnụ ọgụgụ ọchụchọ gị maka ọrụ gị / ọrụ gị dị na ịkwado weebụsaịtị na Warsaw ma nye gị ohere ịnụ ụtọ uru nke ụlọ ọrụ gị mgbe niile.
Ekele niile maka ebe dị irè na Warsaw. Ọ bụ ezie na o siri ike ikwere, okwu abụọ a na-aga n'ihu.
Ọrụ MBA na Dubai maka Freshers
DCC - Kpọtụrụ anyị
Họrọ 2019 - 2020. Gbanyụọ gị na ndị ọzọ na ndị ọzọ!